မျှတသော ဦး နှောက်အားနည်းချက်များ Nonstustst စွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်လမ်းအသစ်ကိုဖွင့်ပါ။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
Nonsubstance စွဲသည် Shared ဦးနှောက်အားနည်းချက်ပွင့်လင်းအဆိုပါ Way ကို: တစ်ဦးက New ပူးတွဲမှာထွင်းထုစွဲ? (2010)
အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ;1187:294-315. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.05420.x.
Frascella J, Potenza MN, Brown LL, Childress AR ။
လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသုတေသနဌာန၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု၊ Rockville, Maryland, USA ။
တရားဝင်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစတင်ကတည်းကရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရောဂါဗေဒသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ၊ လောင်းကစား၊ အစားအစာ၊ လိင်) မှပစ္စည်းများကို (ဥပမာ၊ အရက်၊ ကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူ၊ နီကိုတင်း) မှပစ္စည်းများကိုအတင်းအကျပ်လိုက်စားခြင်းဖြစ်သည်။ ထွန်းသစ်စ ဦး နှောက်၊ အမူအကျင့်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကဤရောဂါရှာဖွေရေးနယ်နိမိတ်ကိုစိန်ခေါ်သည်။
စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (ပဉ္စမထုတ်ဝေမှု (DSM-V)) ၏ပဉ္စမတည်းဖြတ်မှုအတွက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည်ဤသို့အားဖြင့်လောင်းကစားကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးမပါ ၀ င်သောရောဂါများကိုထည့်သွင်းရန်စွဲလမ်းမှု၏ nosologic နယ်နိမိတ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်၊ မသင့်ကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်လောင်းကစားခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်“ ပုံမှန်” ဆက်နွယ်မှုများ (ရင်ခုန်ဖွယ်အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၊ မိခင်နှောင်ကြိုးများ) မှပြneurနာများအားလေ့လာခြင်းအား“ အဆစ်အသစ်တစ်ခုတွင်စွဲလမ်းစေခြင်း” အတွက်ကူညီနိုင်ပုံကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။ Diagnostic Recarving သည်ဆေးစွဲခြင်းသုတေသနကိုအပြုသဘောသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးစွဲခြင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အကျိုးရှိပြီး crossover ဆေးဝါးကုထုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လှုံ့ဆော်သည်။
“ ……နိယာမ…သဘာ ၀ ဖွဲ့စည်းမှုအရ၊ အဆစ်သည်အဆိုးဆုံးသောပန်းပုသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှမချိုးဖောက်သည်…”
ဆိုကရေးတီး, ပလေတိုရဲ့ Phaedrus အတွက် 
အန်နာနှင်းဆီ Childress, Ph.D ဘွဲ့ကို
စွဲလမ်းမှု၏ nosologic re- ထွင်းထုမကြာမီလက်တွေ့နှင့်သုတေသနအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဤရောဂါများ၏အနှစ်သာရ, ၎င်းတို့၏အရေးပါသောနှင့်လိုအပ်သောဒြပ်စင်ကိုခံရလိမ့်မည်။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM V [XNUMX] အတွက်ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ပလေတို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်စွဲချက်တင်ခံရသည်။2]) လောင်းကစားကဲ့သို့သောပစ္စည်းမဟုတ်သောရောဂါများကိုယခင်ကပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရောဂါများအတွက်သီးသန့်သီးသန့်ထားရှိခြင်းတွင်ခွဲခြားသင့်သလားကိုတက်ကြွစွာစဉ်းစားနေကြသည်။ DSM V ကို ၂၀၁၂ အထိနောက်ဆုံးထုတ်ဝေရန်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းအခြားတစ်နေရာရာရှိအခြားအဆစ်များ၌စွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုနှင့် nosologic စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၀ တ္ထုတစ်ခုအား ၀ င်စားခြင်းသို့မဟုတ်ထိုးသွင်းခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုတည်ဆောက်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာမဟုတ်ပါက - နယ်နိမိတ်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
တ ဦး တည်းအဆင့်မှာ, စွဲ၏ re- ထွင်းထုအသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံး DSM အတွက် Sociopathic Personality အောက်တွင်“ ထွင်းထု” ခဲ့သည်။3] နှင့် ၁၉၆၈ တွင်နောက်ထပ် DSM တည်းဖြတ်မှုအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorders အဖြစ်သတ်မှတ်ဆဲဖြစ်သည် (DSM II 4]) ။ နောက်ဆုံး၌၎င်းတို့သည် I980 (DSM III) တွင်လွတ်လပ်သောအဆင့်အတန်းအတွက်“ ထွင်းဖောက်” ခဲ့ကြသည်။5] နှင့်နှစ်ပေါင်း 30 နီးပါးအရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤကြိုတင် nosologic တည်းဖြတ်မူများအရပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါများ (ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမျိုးအစားများအောက်တွင်“ ထွင်းထုထားသည်” သို့မဟုတ်“ တစ်လုံးတည်းရပ်တည်ရန်” တစ် ဦး တည်းရပ်တည်ရန်) ကိုထွင်းထုထားသည်။ အတူတူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ - ဆည်းပူးနေဖြင့်သတ်မှတ်။ ကြိုတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်မတူဘဲ DSM V သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအပဆေးစွဲမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားနေသည်။ ဤရောဂါများကိုယခင်ကကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသောအခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
အနာဂတ် nosology အတွက်ဤ“ မလိုအပ်သော - လုံလောက်သော” အခြေအနေများသည်ပန်းပုထုခြင်းအတွက်အခြားနေရာများတွင်ရှာဖွေရန် - ၀ တ္ထုများနှင့် ၀ တ္ထုမဟုတ်သောဆုလာဘ်များနှင့်မတူသောဆုလာဘ်များ၏အခြေခံတူညီချက်ကိုရှာဖွေရန်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထွန်းသစ်စ ဦး နှောက်, အမူအကျင့်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဒေတာပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် Non- ပစ္စည်းစွဲလမ်းဆင်တူသည့်အခြေခံ, စက်မှုနည်းလမ်းညွှန်ပြဘူး။ တူညီသောစာရင်းအတိုတွင် mesolimbic dopamine ဆုချီးမြှင့်ခြင်းစနစ်ရှိအားနည်းချက်များနှင့် ၄ င်း၏တိုကျရိုကျဒေသမြားတှငျ၎င်းငျး၏ပွုပွငျမှုမြားကိုမတှေ့ရသညျ။ အကျွမ်းတဝင်ရှိသောဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် dopamine agonist ကုသမှုသည်ပါကင်ဆန်၏လူနာအုပ်စုငယ်များတွင်လောင်းကစားခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုပြproblemနာများသည်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။6],  ။ ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာသည်နယ်နိမိတ်အသစ်များ၊ အဆစ်အသစ်တစ်ခုကိုစွဲလမ်းစေခြင်း၏ခိုင်မာသည့်မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးသည်။
ဒေါက်တာများကအောက်ပါအပိုင်းပိုင်း။ Potenza, Frascella နှင့် Brown တို့သည် ဦး နှောက်သုံးကိရိယာများမဟုတ်သောဆေးစွဲမှုများအတွက်နယ်နိမိတ်အသစ်များကိုဆန်းစစ်ရန်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုပြသသည်။ ကဏ္theများသည်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါဗေဒနှင့်နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်ဆက်စပ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ပြenzaနာလောင်းကစားခြင်း, DSM V. အတွက်စွဲအမျိုးအစားထဲသို့ဝင်ခံရဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိပုံရသည်မဟုတ်သောပစ္စည်းမဟုတ်ရောဂါ, ဒေါက်တာ Potenza, အနှစ်ချုပ် (ပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလောင်းကစားဆုလာဘ်၏မသင်မနေရလိုက်ရှာ), မျိုးရိုးဗီဇ (အလွန်အမင်း) ကစတင် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနှင့်မကြာခဏအခြားအရာ ၀ တ္ထုစွဲခြင်းများနှင့်အတူတကွတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဒေတာများ (ဥပမာ၊ ဆုလာဘ်များရှိတုန့်ပြန်မှုပြောင်းလဲခြင်း၊ လောင်းကစားမြင်ကွင်းနှင့်ထိတွေ့နေစဉ်ရှေ့တန်းစည်းမျဉ်းများညံ့ဖျင်းခြင်း) သည်လောင်းကစားခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသောအရာအဖြစ်ငြင်းဆိုသည်။8] ။ လောင်းကစားခြင်းတွင်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအား phenotype နှင့်အတူ "စွဲလမ်းမှု" ၏ရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားသို့ထွင်းရန်အားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ်အဝလွန်ခြင်း၏ရှုပ်ထွေးသောပြproblemနာစဉ်းစားပါ။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်မတူသည်မှာ phenotype ရှိသူများအားလုံးသည်တူညီသောရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားတွင်ပါ ၀ င်ဖွယ်ရှိသည်။ အဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း (BMI) ၏မျိုးရိုးဗီဇသည်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ဦး နှောက်နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာအချက်များကအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ အဝလွန်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်“ အစားအသောက်နှင့်မဆိုင်” ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဝလွန်သူတစ် ဦး ဦး အနေဖြင့်လက်တွေ့ကျကျအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော nosologic ခွဲခြားမှုကိုထွင်းထုနိုင်ပါသလား။ Dr. Frascella ၏သုံးသပ်ချက်အရလျင်မြန်စွာတိုးတက်သော ဦး နှောက်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အား BMI ထက် ကျော်လွန်၍ အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တူညီသော ဦး နှောက်ကွဲပြားမှုများ (ဥပမာ၊ D2 receptor ရရှိမှုနည်းပါးမှု) ရှိသူများကိုခွဲခြားသိမြင်စေနိုင်သည်။9-11] ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနယ်ပယ်မှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုတုန့်ပြန်နိုင်သည် (ဥပမာ၊ mu opioid receptor ရန်လိုသူများသည်ဘိန်းဖြူနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများမှအကျိုးကျေးဇူးကိုပိတ်ပင်ထားသည်။12-14]) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ nosologic system သည်နောက်ဆုံး၌ထိုကဲ့သို့သော ဦး နှောက်နှင့်ကုသမှုကိုအခြေခံသော endophenotypes ကို သုံး၍ အ ၀ လွန်သူများ၏လူမျိုးကွဲအုပ်စုများကိုစွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားသို့ထွင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သော Dr. Brown မှ ဦး နှောက်ကိရိယာများ၏အသုံးဝင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အစွမ်းထက်သောအခြေအနေများကိုလေ့လာရန်ဥပမာ - အစောပိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းအရူးအမူးစွဲမက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောလိင်မှုစွဲမက်ခြင်းနှင့်ပူးတွဲမှုတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ဟုသတ်မှတ်သည်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်အတူအချို့သောလက်တွေ့တူညီမျှဝေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူအများအပြားက၎င်းကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ“ ပုံမှန်” ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဆုလာဘ်အားပြင်းထန်စွာလိုက်စားခြင်း၊ (စိတ်အားထက်သန်မှု၏မနာလိုရာဇဝတ်မှုများအပါအဝင်) ချမှတ်ခြင်း။ အချစ်နှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုအတွက်အခြေခံဆုအစီအစဉ်သည်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်၍ ဤ“ ပုံမှန်” ပြောင်းလဲသည့်အခြေအနေကိုလေ့လာခြင်း“ ပုံမှန်” ဆားကစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားရောဂါဗေဒဖြစ်သောပြည်နယ်များရှိအားနည်းချက်များအား endophenotypes နှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ ပုံမှန်” ပြောင်းလဲသည့်ပြည်နယ်များ (ပိုမိုမကြာခဏသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောအရူးအမူးဖြစ်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုခက်ခဲခြင်း) တွင်အားနည်းချက်ရှိသူများသည်ပစ္စည်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
အတူတူယူဒီစာရေးဆရာများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဇီဝဗေဒ tools များနှင့်ပွင့်လင်းစိတ်ကိုနှင့်အတူရှေ့ဆက်ရောဂါရှာဖွေစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆစ်အဆစ်အသစ်တစ်ခုတွင်စွဲလမ်းမှုကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါ ဦး နှောက်ဆုချခြင်းဆားကစ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်လိုက်စားခြင်း (အစားအစာ၊ လောင်းကစား၊ လိင်၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ အင်တာနက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းစသည်တို့) ကို“ စွဲလမ်းမှု” ဟုတံဆိပ်ကပ်ရန်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ သို့သော်၎င်းအားနည်းချက်ရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၌အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်မည်သည့်အရာသည်မဆိုမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်တွေ့ရသူများနှင့်ထူးခြားသောတူညီမှုကိုပြသသည့် ဦး နှောက်နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုးတက်မှုနှင့်အလားတူကုသမှုများကိုပင်တုန့်ပြန်မှုပြုနိုင်သည်။ ဦး နှောက်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအားနည်းချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလိုက်စားခြင်းအားရောဂါဗေဒဖြစ်လာစေရန်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤမျှဝေထားသော ဦး နှောက်အားနည်းချက်များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုမြန်စေပြီး၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုရော၊ ပစ္စည်းမဟုတ်သော၊ စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုပါထိရောက်စွာကုသနိုင်သည်။
၂ ။ စွဲနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား
မာ့ခ် N. Potenza, MD, Ph.D ဘွဲ့ကို
လောင်းကစားခြင်းကိုပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုခုရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုစွန့်စားမှုဟုသတ်မှတ်ပြီးနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွင်းယဉ်ကျေးမှုများ၌လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။15] ။ လူ့အပြုအမူဆိုင်ရာအစောပိုင်းမှတ်တမ်းများကလောင်းကစားခြင်း၏သာဓကကိုပြသသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည်လောင်းကစား၏အလွန်အကျွံနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုပုံစံများကိုဖော်ပြရန်လက်ရှိအမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုအသင်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-IV-TR) တွင်အသုံးပြုသောရောဂါရှာဖွေရေးဝေါဟာရဖြစ်သည်။16] ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအနည်းငယ်ကဇီဝဗေဒအတိုင်းအတာအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီရောဂါစုစုပေါင်းအတူတကွ၏အတိုင်းအတာကိုလေ့လာခဲ့ပေမယ့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည်လက်ရှိတွင် kleptomania, pyromania, trichotillomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါနှင့်အတူအုပ်စုဖွဲ့သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအတွက်ပါ ၀ င်မှုစံသတ်မှတ်ချက်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအတွက်အချက်များနှင့်တူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းမအောင်မြင်သည့်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ဘဝ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသည်ရောဂါတစ်ခုစီအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးစံနှုန်းများတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း non- ပစ္စည်းဥစ္စာ -related စွဲအပေါ်တစ် ဦး "အမူအကျင့်" အဖြစ်ချေါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းမှီခိုအကြားလက်တွေ့နှင့် Phenomenological တူညီ
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခြင်းတို့အတွက်ယေဘူယျပါ ၀ င်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များအပြင်အခြားလက်တွေ့လက္ခဏာများသည်ရောဂါများကိုဝေမျှထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တဏှာ (သို့) စွဲမက်ဖွယ်အားထုတ်မှုများကိုရောဂါနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့မြင်ရပြီး၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးသည်လောင်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းတို့တွင်နောက်ဆုံးပါဝင်ပတ်သက်မှုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် နှင့်ကုသမှုများအတွက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ။ ထို့အပြင်အလားတူ ဦး နှောက်ဒေသများ (ဥပမာ၊ ventral striatum နှင့် orbitofrontal cortex) သည်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ကိုကင်းမှီဝဲခြင်းတွင်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်း၌လောင်းကစားခြင်းတိုက်တွန်းမှုများကိုအထောက်အကူပြုသည်17, 19] ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မကြာခဏယှဉ်ပြိုင်ရုံသာမကအလားတူသောရောဂါများ (ဥပမာလူမှုရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ) လည်းရှိသည်။20, 21] ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခြင်းသင်တန်းများနှင့်တူညီသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုကဲ့သို့ပင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအကြားရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးများအကြားခန့်မှန်းချက်နိမ့်ကျခြင်းတို့ပါဝင်သည်။22, 23] ။ လောင်းကစားခြင်းစတင်ခြင်းတွင်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောလောင်းကစားခြင်းနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။24, 25] ။ “ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း” ဖြစ်စဉ်သည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းမှီခိုမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပုံရသည်။26, 27] ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကလောင်းကစားခြင်းများအတွက်အရက်သေစာအတွက်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဤဖြစ်စဉ်သည်သာမန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ဘဝတွင်နောက်ပိုင်းတွင်အပြုအမူ၌စတင်ပါ ၀ င်သော်လည်းလေ့လာမှုနှင့်ပြproblemနာများပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုအကြားကာလကိုရှေ့ပြေးနိမိတ်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက28] ။ အတူတူယူ, ဒီတွေ့ရှိချက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအကြားအများအပြားဘုံလက်တွေ့နှင့်ဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များဖော်ပြသည်။
ပစ္စည်းမှီခိုခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှစ်ခုစလုံးသည်မျိုးရိုးလိုက်သောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်ဟုပြသည်။29-31] ။ အရက်သေစာမှီခိုခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများအပါအ ၀ င်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်အခြားရောဂါများအတွက်အဖြစ်များသည့်မျိုးရိုးဗီဇအထောက်အပံ့များကိုအမျိုးသားများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။32, 33] ။ သို့ရာတွင်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်မျိုးရိုးဗီဇထည့်ဝင်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများသည်အရက်၏မှီခိုမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မတူပဲရောဂါတစ်ခုစီအတွက်တိကျသောပံ့ပိုးမှုများပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအင်ဇိုင်းတွေအဘို့အ coding မျိုးဗီဇအတွက် allelic မျိုးကွဲအရက်မှီခိုမှုအတွက်အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်မှထူးခြားသောဖြစ်မျှော်လင့်စေခြင်းငှါ၎င်း, ထကြွလွယ်သော propensities နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇရောဂါများကိုဖြတ်ပြီးမျှဝေခံရဖို့ယူဆချက်စေခြင်းငှါ [34, 35] ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအတွက်တိကျသောမော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအားအစောပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း (ဥပမာ dopamine D1 receptor ကို encoding ဗီဇ၏ Taq A2 allele) တွင်တွေ့ရှိရသည်။36] ။ သို့သော်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာတိကျခိုင်မာမှုမရှိပါ (ဥပမာလူမျိုးရေးသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးလက္ခဏာများအားဖြင့်အလွှာခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘဲရောဂါရှာဖွေအကဲဖြတ်မှုများမပါ ၀ င်ပါ) နှင့်လတ်တလောလေ့လာမှုများကန ဦး တွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူကူးယူခြင်းမပြုပါ။37] ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့ဘုံနှင့်ထူးခြားသောမျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကိုပိုမိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇ - ကျယ်ပြန့်သဘောသဘာဝလေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။
Person ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် Neurocognitive အင်္ဂါရပ်များ
ဘုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် neurocognitive features တွေရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှာဖော်ပြထားပါပြီ။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လိုပဲ34] စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းတွင်ရှိသူများကိုမြှင့်တင်ထားသည်။35, 38-41] ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုကဲ့သို့, နှောင့်နှေးလျှော့ Parigigms အတွက်ပိုကြီးတဲ့နှောင့်နှေးသူတွေကိုကျော်သေးငယ်တဲ့, ချက်ချင်းဆုလာဘ်များ၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်  ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေသူနှင့်တူရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ငန်းများကိုအပေါ်အားနည်းချက်ရွေးချယ်မှုလုပ်တွေ့ရှိခဲ့ [42, 43] ။ သို့သော်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအကြားထူးခြားသောလက္ခဏာများလည်းအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လေ့လာမှုတစ်ခုရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်မှီခိုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအချိန်ခန့်မှန်း, တားစီး, သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏တာဝန်များကိုအပေါ်လိုငွေပြမှုပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့44] ။ လွတ်လပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းရှိသူများသည်လောင်းကစားလုပ်ငန်းနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုင်ရာကဏ္aspectsများနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူလိုငွေပြမှုကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့သည်အရက်မှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောလိုငွေပြမှုကိုပြသသည့်အလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသည်။45] ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခြင်း (ဥပမာ - နာတာရှည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း) သည် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားတွင်မတွေ့ရသောဆက်စပ်သည့်အပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။46-48].
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုတို့အကြားလက်တွေ့ကျသောဖြစ်ရပ်မှန်၊ ဖြစ်တည်မှု၊ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များတွင်ထင်ဟပ်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။35] ။ ဥပမာအားဖြင့်အလားတူ ဦး နှောက်ဒေသများ (ဥပမာ၊ ventral striatum နှင့် orbitofrontal cortex) သည်လောင်းကစားတွင်အားကစားလောင်းကစားခြင်းနှင့်ကိုကင်းမှီခိုမှုအပေါ်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်း၌လောင်းကစားခြင်းတိုက်တွန်းမှုများကိုအထောက်အကူပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။19] ။ လောင်းကစားပါရာဒိုင်းစဉ်အတွင်းငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်လျော့နည်းသွားသည့်သွေးကြောအားထုတ်မှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။49] ။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အရက်သေစာမှီခိုခြင်း (သို့) ကိုကင်းမှီဝဲသူနှင့်ပတ်သက်သောသူများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။50, 51].
အဆိုပါ ventral striatum နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချိတ်ဆက်အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex, အန္တရာယ် - ဆုလာဘ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်43, 52, 53] ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် ventromedial prefrontal cortex ၏ activation လျော့နည်းကန ဦး လောင်းကစားတိုက်တွန်းခြင်းနှင့်သိမြင်ထိန်းချုပ်မှု၏လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့သည်41, 54] ။ တစ် ဦး ကနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု activation ၏ဒီဂရီရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လောင်းကစားပြင်းထန်မှုနှင့်အတူပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်အတူ simulated လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်းလျော့နည်း ventromedial prefrontal cortical activation တွေ့ရှိခဲ့49] ။ မကြာသေးမီက Iowa Gambling Task ၏ဖျော်ဖြေစဉ်အတွင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များလျော့နည်း ventromedial prefrontal cortical activation ပြသခဲ့သည်55] ။ အတူတကွဤအချက်အလက်များသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုတို့တွင် ventral fronto-striatal circuitry ၏ချွတ်ယွင်းချက်ကိုပြသပြီးအကျိုးရလဒ်အပြောင်းအလဲနှင့်အားနည်းချက်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ရှုထောင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
နောက်ထပ်မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရကျန်းမာရေးဘာသာရပ်များသည်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏အာရုံကြောနှင့်ဆက်စပ်မှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။56] ။ အနီးကပ်လွဲချော်မှုအခြေအနေတစ်ခုသည် slot machine တစ်ခု၏ပထမ reels နှစ်ခုသည်တူညီသောသင်္ကေတပေါ်တွင်ရပ်ပြီးတတိယ reel သည် non-ကိုက်ညီသောသင်္ကေတကိုသော့ခတ်သောအခါဖြစ်ပေါ်သည်။ တတိယ reel ၏ရပ်တန့်ခြင်းကိုမျှော်လင့်နေစဉ် ဦး နှောက်၏ဒေသများ (ဥပမာ - striatum) ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာသည်။ ရလဒ်အဆင့်အတွင်း၊ ဤ ဦး နှောက်ဒေသများ (ဥပမာ - striatum, ventral tegmental includingရိယာအပါအဝင် midbrain ဒေသ) သည် activation ပြသခြင်းအားဖြင့်ဤဖြစ်ရပ်များကိုအားဖြည့်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ပိတ်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည့်ဒေသ (ဤဖြစ်ရပ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိသောအရာအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း) သည် ventromedial prefrontal cortex ဖြစ်သည်။ ventromedial prefrontal cortical လှုပ်ရှားမှုလည်းကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်အရှုံး - လိုက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ်57] လက်ရှိဒေတာများအရလောင်းကစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုယူဆရသောဖြစ်ရပ်များသည် ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းဖြင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သောပုံမှန်မဟုတ်မှုများကိုပြသနေသည်။
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုတို့အတွက်အပြုအမူနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများသည်လည်းတူညီမှုကိုပြသည်။ လောင်းကစားသမားအမည်မသိသည်အဆင့် (၁၂) ဆင့်ပါသော Alcoholics Anonymous အစီအစဉ်ကို အခြေခံ၍ လောင်းကစားခြင်းနှင့်တက်ရောက်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အလွယ်ကူဆုံးရရှိနိုင်သောကူညီမှုပုံစံဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူသည်ကောင်းမွန်သောကုသမှုရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်သည်။58, 59] ။ ထိုကဲ့သို့သောသိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးအဖြစ်အခြားအမူအကျင့်ကုထုံး, ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုလယ်ပြင်ကနေမွေးစားခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြပြီ60] ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အတူကူညီရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသောတိုတောင်းသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင်ကတိရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။61], မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုကုသမှုတွင်အောင်မြင်မှုရှိကြောင်းပြသရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ 62, 63].
အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆေးဝါးကုထုံးရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်19] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေရခြင်းနှင့်အတူ serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်းသည်ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုများတွင်ရလဒ်များရောထွေးနေသည်။19, 64, 65] ။ ထိုကဲ့သို့သော naltrexone (opioid နှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှု၏လက္ခဏာများအတွက်အတည်ပြုချက်ပေးသောဆေးဝါး) ကဲ့သို့သော Opioid ရန်လိုသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအတုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်ကုသမှုတွင်အားကစားလောင်းကစားသမားများအကြားတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ စတင်ခြင်းနှင့်အရက်၏မိသားစုသမိုင်းရှိသူများ  ။ မကြာသေးမီကနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုပေါ်တွင်အခြေခံသည်66] N-acetyl cysteine ​​ကဲ့သို့သော glutamatergic agent များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရောဂါလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင်ပဏာမထိရောက်မှုရှိသည်။
G. အနှစ်ချုပ်: စွဲနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအများအပြားတူညီပြသပါ။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အင်္ဂါရပ်များသည်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလောင်းကစားခြင်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။29]) လက်ရှိဒေတာကဆေးစွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားစွဲခြင်းတို့အကြားအထူးသဖြင့်အနီးကပ်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
၂ ။ စွဲနှင့်အဝလွန်ခြင်း
ဂျိုးဇက် Frascella, Ph.D ဘွဲ့ကို
အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတို့အကြားက Neurobiological ဆက်စပ်မှုများ
အဝလွန်ခြင်းသိသိသာသာတိုးပွားလာသည်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လက်ရှိခန့်မှန်းချက်အရအမေရိကန်ရှိအရွယ်ရောက်သူ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသောကလေးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များသည်အ ၀ လွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အ ၀ လွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း (67], ) ။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ဘီလီယံကျော်နှင့်ကမ္ဘာ့ကလေး ၁၀% တို့သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ သက်တမ်းသည်သက်တမ်းလျော့ကျခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါနှင့်အချို့သောကင်ဆာများကဲ့သို့သောဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များတိုးလာသည်။ဥပမာ , ) ။ အဝလွန်ခြင်း၏ etiology ကွဲပြားခြားနား neurobehavioral အချက်များရောင်ပြန်ဟပ်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်၏ သို့သော်ကြီးထွားလာသောစာပေများအရအလွန်အကျွံမသောက်ရသည့်အစားအစာသည် DSM-IV တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုနှင့်အတူမျှဝေနိုင်သည်ကိုထောက်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - DSM-IV ပစ္စည်းမှီခိုမှုစံသတ်မှတ်ချက် (သည်းခံမှု၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း / တိုးချဲ့သုံးစွဲခြင်းများ၊ အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်စွဲစွဲမြဲမြဲဆန္ဒ / မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှု၊ ပစ္စည်းအမြောက်အမြားကိုရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ လူမှုရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုံးရှုံးခြင်း) သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကြောင့်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများနှင့်မြဲမြံသောသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါပစ္စည်းဥစ္စာဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူအချို့အတွက်အစားအစာသည်စွဲလမ်းစေသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။71], , ) နှင့်ဆင်တူချက်များအလွန်ဆင်တူသဖြင့် DSM-V တွင်အဝလွန်ခြင်းကိုစိတ်ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။10]; ကြည့်ရှုပါ  ဒီအယူအဆပတျဝနျးကငျြရှုပ်ထွေးသောဆွေးနွေးမှုများအတွက်) ။ ဆား၊ အဆီများနှင့်သကြားများပါ ၀ င်သည့်အလွန်အရသာ ရှိ၍ အရသာရှိသောအစားအစာများပေါများခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူဤအလွန်အင်အားကြီးမားစေသောအားဖြည့်ဆေးများကိုဆီးတားရန်ခဲယဉ်းသည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားကွဲပြားခြားနားသောတူညီမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့်သက်ဆိုင်ရာ neurobiological အချက်အလက်အချို့ကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလေ့လာမှုနယ်ပယ်နှစ်ခုအကြားဆက်စပ်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆက်သွယ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှိုင်းယှဉ်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အဝလွန်ခြင်းသုတေသနသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု / စွဲခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်အလားအလာကောင်းများကိုသတင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည် အပြန်အလှန်အားဖြင့်။ သိပ္ပံနည်းကျအငြင်းပွားမှုများကြီးထွားနေသော်လည်း“ အစာစားခြင်း” ဟူသောတည်ရှိမှုသည်လက်ရှိအဝလွန်မှုပျံ့နှံ့မှုကိုအဓိကမောင်းနှင်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။75-77]) ဤသုံးသပ်ချက်သည်ဤဆောက်လုပ်ရေးကိုတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ဘဲနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှစ်မျိုးစလုံးတွင်ပါဝင်သော neurobiologic system ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုကြားရှိမျဉ်းပြိုင်များကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား neurobiologic ယန္တရားများအားကောင်းစေသည့်အားဖြည့်ဆေးများကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပြီးအပြုအမူအလွန်အကျွံနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင်ပြသထားသောထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတို့အကြားတူညီမှုသည်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အဝလွန်သူတစ် ဦး ဦး ၏လူ ဦး ရေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
ခ။ ဦး နှောက်ဆုချခြင်းစနစ်
အထူးသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှသက်သေအထောက်အထားများတိုးပွားလာခြင်း၊ ဦး နှောက်စနစ်အချို့သည်မစားမသောက်ဘဲစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်းများတွင်အခြေခံကြောင်းဖော်ပြသည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများစွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်မျှတမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များသည် ဦး နှောက်၏ဖြန့်ဝေထားသောဒေသများပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုယန္တရားများနှင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ ပုံမှန်အစာကျွေးခြင်း၏စည်းမျဉ်းကိုစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဖျန်ဖြေသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုထက်ကျော်လွန်ပါကစနစ်များသည်ဤအပြောင်းအလဲကိုအချက်ပြပြီးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းရလဒ်များကိုဖော်ပြသည်။ အလွဲသုံးစားမှုများကဲ့သို့များသောအားဖြင့်အရသာရှိသောအစားအစာများသည်အပြုအမူများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အားဖြည့်ဆေးများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ non-homeostatic စား) ။ အလွန်အကျွံရှုပ်ထွေးပြီးအကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် (အဝလွန်ခြင်းသို့ ဦး တည်သောအစာအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကိုအခြေခံသည့်ယန္တရားများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုစွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း)ဥပမာ မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုများ၊ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၊ အာဟာရပြည့်ဝမှု၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ရရှိနိုင်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် / လူမှုရေး / ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ9, 78]) ။
အချို့သောအစားအစာများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုရှိသောပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၏အဓိကအချက်မှာ ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ဤသည်မြင့်မားသောဆင့်ကဲပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည့်စနစ်တွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့် neurobiologic network ပါ ၀ င်သည်။ အထူးသဖြင့် mesolimbic dopamine (DA) စနစ်ဖြစ်သည်။ဥပမာ [79-83]) ။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင်ပစ္စည်းတစ်ခု (သို့မဟုတ်အစားအစာ) သည်မည်မျှထိရောက်ပြီးထိုပစ္စည်း (သို့မဟုတ်အစားအစာ) ၏အနာဂတ်စားသုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်သည်စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောနို့တိုက်ကျွေးရေးဆားကစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
နျူကလိယ accumbens အတွက် Dopamine ဖြန့်ချိအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအများစုကိုအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ပြသခဲ့သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကိုဖျန်ဖြေဖို့ထင်နေသည် (ဥပမာ [84-95]) ။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအစာများကိုစားမိသောအခါ dopamine ထွက်လာပြီးတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများက dopamine ကိုနျူကလိယ accumbens နှင့် ventral tegmental occursရိယာတွင်တွေ့ရှိရသည်ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကပြသခဲ့သည်။ဥပမာ [96-102]) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများပြသထားသောနျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အစားအစာ၏အကျိုးဂုဏ်သတ္တိများ၏တိုက်ရိုက် function ကိုဖြစ်တယ်, dopamine ထုတ်လွှတ်အစားအစာအာဟာရ၏ function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်97, 103, 104] ။ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်ကသာမန် homeostatic အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အာဟာရပြည့်ဝမှု၊ ဆုလာဘ်နှင့် dopamine တို့၏ဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ အစာအာဟာရနှင့်အာဟာရရှိမှုတို့ကိုလည်းငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းမှခွဲထုတ်နိုင်သည်။ဥပမာ , ) ။
အရသာနှင့်ဆုလာဘ်အကြားရှိ neurobiological ဆက်နွယ်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာကိုနို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ အစားအစာစီမံကိန်းအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောအချက်များကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည့် corticolimbic လမ်းကြောင်းများသည် hypothalamic nuclei နှင့်ဤစနစ်များ၏ဆက်သွယ်မှုသည်ငတ်မွတ်မှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။106, 107] ။ အခြားတွေ့ရှိချက်များအရအစားအသောက်လှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံခံလုပ်ဆောင်မှုကိုနျူကလိယ accumbens သို့ limbic projections နည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။108]) ။ အစားအစာနှင့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ပျော်စရာရှုထောင့်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးကြောင်းနောက်ထပ် ဦး နှောက်areaရိယာ orbitofrontal cortex (ဥပမာ [80, 82, 83, 105, 109-113]) ။ အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဤစနစ်များစွာသည်အလွဲသုံးစားမှုရှိသောပစ္စည်းများကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာသူများနှင့်ထပ်တူကျသည်။ အရသာရှိတဲ့အစားအစာရောမူးယစ်ဆေးရောပါအကျိုးရှိပါတယ်။
dopamine စနစ်သည်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သော်လည်းအခြားစနစ်များမှာလည်းအရေးကြီးသည်။ ကြီးထွားလာနေသောစာပေများအရ endocannabinoid စနစ်သည်ဆုလာဘ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုတိုက်ရိုက် modulate လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ဥပမာ [114-121]) ။ အလားတူပင် endogenous opioid စနစ်သည်ဆုလာဘ်ပြောင်းလဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။122, 123] နှင့် endogenous cannabinoid နှင့် opioid စနစ်များသည် ဦး နှောက်၏အကျိုးကိုဖြန်ဖြေရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြသည်။120]) ။ ဆုလာဘ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းအပေါ်ဤစနစ်နှစ်ခု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူသည့်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အစာစားခြင်းနှင့်စားသုံးမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် endogenous cannabinoid နှင့် opioid စနစ်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ဥပမာ , [13, 125-127]; သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။128, 129]) ။ မကြာသေးမီကစားနပ်ရိက္ခာအတွက်အာဟာရနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖျန်ဖြေပေးသည့် opioid စနစ်များသည် neurobiologically ကွဲပြားကြောင်းပြသခဲ့သည်။130]) ။
C. လက်တွေ့ ဦး နှောက်ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်
နှစ် ဦး စလုံးချိတ်ဆက်တင်ပြသက်သေအထောက်အထားအများစုနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း၏အာရုံကြောအပြုအမူရှုထောင့်များ၏တိုက်ရိုက်အစီအမံအစီရင်ခံတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှဖြစ်ခဲ့သည်။ လူ့ ဦး နှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတွင်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးစလုံးကိုအခြေခံသည့်ထပ်မံလုပ်ဆောင်သည့်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။ ပုံမှန်အစားအစာစားသုံးမှုကို homeostatic ဖြစ်စဉ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုထိန်းချုပ်သောတူညီသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များကြောင့်လည်းလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ Positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography (PET) နှင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နည်းလမ်းများသည် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ထုတ်လွှင့်စနစ်များနှင့်အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်လုပ်သောဆားကစ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်နျူကလိယနျူကလီး၏ ဦး နှောက် dopamine ပမာဏနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအရလူကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သတ္တဝါများကိုအလွဲသုံးစားမှုတွင် dopamine စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ Volkow နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  လူသားများတွင် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများ ဦး နှောက် dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်နှင့်ဆုလာဘ် / အပျော်အပါး၏ပုဂ္ဂလဒိper္အမြင်အပြုသဘောဖြန့်ချိ dopamine ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် dopamine D2 receptors ၏ယေဘုယျအဆင့်များသည် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည် - ဆိုလိုသည်မှာ dopamine D2 receptor level သည်ဆေး၏ပိုမိုအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။132] အစားအစာနှင့်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုလေ့လာမှုများအရ၊ ကျန်းမာသော၊ အစားအစာချို့တဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုအကြိုက်ဆုံးအစားအစာများဖြင့်တင်ပြသောအခါ dopamine သည်အစားအစာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုတင်ပြသည့်အခါ 38 ထုတ်ပေးသည်။133] အဖြစ်အစာစားသုံးပြီးနောက်။ (dorsal, ဒါပေမယ့် ventral မဟုတ်, striatum မဟုတ်) ဖြန့်ချိသော dopamine ပမာဏသည်အစာစားခြင်းသာယာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။110] dorsal striatum သည်ကျန်းမာသောသူများအတွက်အစားအစာဆုကိုဖျန်ဖြေပေးလိမ့်မည်ဟု 38,  ။ dorsal striatum နှင့် notventral striatum (မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်သောareaရိယာ) တွင်ဖျန်ဖြေခြင်းခံရသည့်အစားအစာဆု / လှုံ့ဆော်မှု၏ဤတွေ့ရှိချက်သည်အစားအစာနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ dorsal striatum သည်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းတွင်အရေးကြီးကြောင်းပြသခဲ့သည် (ဥပမာ , ) နှင့်ချောကလက်စားသုံးနေစဉ် dorsal striatum တွင်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးများလာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤဒေသရှိသွေးစီးဆင်းမှုသည်သာယာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည် () ။
တဏှာသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးစလုံး၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကံျွသောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်း၏အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်၊ လေ့လာမှုများစွာသည်အစားအစာ၏သာယာပျော်ရွှင်မှုသို့မဟုတ်အစားအစာလိုလားမှု၏အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်စပ်မှုများကိုသရုပ်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည် (ဥပမာ၊135], , , , ); သို့သော်အနည်းငယ်သောသူများသည်အစားအစာတည့်မတ်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ Pelchat et al ။ () အစားအစာတဏှာကို ဦး နှောက်လှုပ်ရှားခြင်းလေ့လာခြင်းကိုလေ့လာပြီး Hippocampus၊ insula နှင့် caudate ရှိတဏှာနှင့်သက်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ချောကလက်တောင့်တင်းမှုများကိုမတိမ်းမယိမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ cravers များသည် medial prefrontal cortex၊ anterior cingulate နှင့် ventral striatum ကဲ့သို့သောဆုလာဘ်ဒေသများတွင်ပိုမိုတက်ကြွမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။138]) ။ အစားအစာတွန်းအားပေးခြင်းတွင်ပါဝင်သောနေရာများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးတိတ်ဆိတ်ခြင်း (anterior cingulate) ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးတွန်းအားလေ့လာမှုတွင် ဦး နှောက်areasရိယာများနှင့်အနည်းငယ်ထပ်နေသည်။ဥပမာ , , , , , , , , ) ventral striatum (ဥပမာ , ), Hippocampus (ဥပမာ , ); အင်ဆူလာ (ဥပမာ , , , , , , ) နှင့် dorsomedial နှင့် dorsolateral prefrontal cortex (ဥပမာ , ; ; , ) ။ သတိပြုသင့်သည်မှာဤ ဦး နှောက်ပုံရိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာလေ့လာမှုတွင်စမ်းသပ်ခံရသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှီခိုနေရကြောင်း၊ အစားအစာတပ်မက်မှုလေ့လာမှုများတွင်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အဝလွန်သူများ၏တဏှာကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အစားအစာနှင့်အစားအစာများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဝလွန်သူများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမည့်စနစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဤတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အလုပ်မဖြစ်သောအစားအစာဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲသည်ရောဂါဗေဒအစာနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် neurobiological အလွှာကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ကိုယ်စားပြုသည်ဟုယူဆရသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့်စားသုံးနိုင်သောအစားအစာဆုအတွက် ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုများသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပိန်ကြုံသူများနှင့်ကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဝလွန်သူများသည်မျှော်လင့်ထားသောနှင့်အမှန်တကယ်အစာစားခြင်းကာလအတွင်းအဓိကအရသာရှိသော cortex၊ somatosensory cortex နှင့် anterior cingulate တို့တွင် ဦး နှောက်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေခဲ့သည်။150] ။ စားသုံးနေစဉ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဝလွန်မှုတွင်လျော့နည်းသွားသောတက်ကြွမှုသည် dopamine receptor ရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။ BMI ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်အားတက်ကြွစွာတိုးမြှင့်ခြင်းကိုယာယီ operculum နှင့် dorsolateral prefrontal cortex တွင်တွေ့ရှိရပြီး insula နှင့် frontoparietal operculum တွင်ပိုမိုတက်ကြွသောအစားအစာဆုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပိန်ပိန်နေသည့်လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် အစားအစာတင်ဆက်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုများ၊ စားသုံးနေစဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုနှင့်အတူအစာစားခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနဗ်ကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အဝလွန်ခြင်းနှင့် dorsal striatum ၏ hypofunctioning အကြားဆက်နွယ်မှုမှာ A1 allele ရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Taqငါမျိုးဗီဇ  ။ A1 allele ရှိသူများအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် BMI အပေါ် striatal တုန့်ပြန်မှုအကြားအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုမှာသိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသည်။152]) ။ ဤကွာခြားချက်သည်အ ၀ လွန်သူများ၏ striatum တွင် dopamine D2 အဆင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် dopamine အချက်ပြမှုကိုအလျှော့ ပေး၍ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှုနည်းပါးသည်။ ထို့အပြင်ဤ dopamine D2 receptor gene polymorphic နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီသည်တုန့်ပြန်မှုအခြေခံသည့်သင်ယူမှုတာဝန်ရှိသည့်အမှားများမှသင်ယူခြင်း၌လိုငွေပြမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Dopamine D2 receptor လျှော့ချရေးသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု၏အကျိုးဆက်များအပေါ် sensitivity လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။153] ။ လေ့လာမှုများလည်း dopamine D2 အဲဒီ receptor ကိုအကြံပြုသည် Taqငါ A1 polymorphic ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော (ဥပမာ [154-156]) ။ မကြာသေးမီက dopamine D2 receptor ၏သိသိသာသာမြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှု Taqငါ A1 allele polymorphic နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက methamphetamine - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည် [AXNUMX157] ။ ဒီ polymorphism နှင့်အတူပစ္စည်းမှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီကိုလည်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအစီအမံအပေါ်သိသိသာသာနိမ့်သွင်းယူ, သိမြင်မှုလိုငွေပြမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤရလဒ်သည် dorsal striatum တွင်တုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းကြောင်းပြသနေသော်လည်း၎င်းသည်အလေ့အထလေ့လာမှုတွင်အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံ (ဥပမာ၊158]; ; ), Rothemund et al ။  ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားသောဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးမှုကိုညွှန်ပြသည့်ပုံမှန်အလေးချိန်ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအဝလွန်သောအမျိုးသမီးများအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုမြင့်မားသောကယ်လိုရီအစာသည်အခြားကိုယ်အင်္ဂါများဖြစ်သည့် anterior insula၊ ။ အ ၀ လွန်သူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အစားအစာများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်စနစ်၏လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကွဲပြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကွာခြားချက်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ High- ကယ်လိုရီအစားအစာများအစားအစာနှင့်အစားအစာတွေကို (medial နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် orbitofrontal cortex, amygdala, နျူကလိယ accumbens / ventral striatum, medial prefrontal cortex, insula, anterior cingulate cortex, ventral pallidum, အစားအစာနှင့်အစားအသောက်တွေကို) မှစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေ ဦး နှောက်inရိယာများတွင်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ် activation ထုတ်ယူ ပုံမှန်အလေးချိန်တစ် ဦး ချင်းစီနှိုင်းယှဉ်အဝလွန်များအတွက် caudate, putamen နှင့် hippocampus  ။ စာရေးသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များသည်အဝလွန်ခြင်းမှအစားအစာများကိုတုံ့ပြန်မှုကိုပြသော ဦး နှောက်ကွန်ယက်များသည်စွဲလမ်းမှု၌မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းအကြံပြုသည်။
အဝလွန်သူများသည် ဦး နှောက်ဆုချသည့်နေရာများတွင်အစားအစာအတွက်အရေးကြီးသောအစားအစာဆုကိုရရှိခြင်းရှိ၊ မရှိသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုရှိသည့်ဆုအစီအစဉ်တွင်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသေးသည်။ Stice et al ။  ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အမူအကျင့်နှင့် ဦး နှောက်ပုံရိပ်အထောက်အထားကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ သူတို့ကနိဂုံးချုပ်ထားသော်လည်းအချက်အလက်များအားလုံးကအဝလွန်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဝလွန်သူများသည်အစာစားခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်စပျစ်သီးနှင့် somatosensory cortex တွင်ပိုမိုတက်ကြွမှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကား ဦး နှောက်ဒေသများရှိဤမြင့်တက် activation အလွန်အကျွံစားရန်အားနည်းချက်တိုးမြှင့်နိုင်ဘူး။ သူတို့သည်အဝလွန်ခြင်းအားအထောက်အကူပြုနိုင်သောအလွန်မြင့်မားသောအာဟာရရှိသောအစားအစာများကိုစားသုံးရန်တွန်းအားပေးသည့် striatum ရှိ receptors များအားလျှော့ချခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်စားခြင်းက ဦး တည်နိုင်သည်ဟုထပ်မံယူဆကြသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာအချို့သောကွဲပြားမှုများ (hyperactive နှင့် hypoactive ဦး နှောက်ဒေသများ) ၏ရလဒ်များသည်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့လေ့လာမှုများကဘာသာရပ်များသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေချိန်တွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုလေ့လာအကဲဖြတ်သည်။ ဤလေ့လာမှုများတွင်အစားအစာ ဦး စားပေး၊ အစားအစာမမှန်ခြင်းသမိုင်း၊ အစာစားခြင်းပုံစံနှင့်လက်ရှိအစားအစာတို့သည်အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။162]), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအချက်များများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုရလဒ်တွေကကွဲပြားခြားနားတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမတူညီနိုင်ဘူးလို့လည်းအကြံပြုတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာနှင့်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါအနားယူခြင်းသည်150] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အနားယူနေသည့်ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းသည်ပိန်။ အဝလွန်သူများနှင့်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အဝလွန်သူများသည်နှုတ်ခမ်း၊ လျှာနှင့်ပါးစပ်တို့၏အာရုံခံစားမှုနောက်ကွယ်ရှိ ဦး နှောက်ဒေသများရှိပိန်ကြုံသောသူများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောအနားယူခြင်းဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ဆောင်မှုရှိကြသည်။164] ။ အဆိုပါအဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အစားအစာအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက် ဦး နှောက်ဒေသများရှိဒီတိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုအစားအစာတစ်ခုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆျောမှုမောင်းနှင်မှုအတွက်သူတို့ကိုအန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်
မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်တုန့်ပြန်ဆုလာဘ်ကွန်ယက်အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု၏လေ့လာမှု, Stoeckel et al ။  ပုံမှန်အလေးချိန်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဝလွန်သူများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အမိဂဒလမှအစာအာဟာရရရှိမှုတန်ဖိုး၏အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှု / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များ၏အားနည်းသောမော်ဂျူလာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည့် Orbitofrontal cortex နှင့် nucleus accumbens သို့အစားအစာများကိုတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ တိုးမြှင့်အစားအစာ drive ကို ဦး ဆောင်မှ ဦး ဆောင်စားသုံးမှုအောက်ပါ နျူကလိယမှ orbitofrontal cortex တိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှု accumbens အဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီမှာလည်းအစားအစာများကိုစားသုံးရန်တိုးမြှင့် drive ကိုအထောက်အကူပြုရန်ထင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် orbitofrontal cortex အကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောအနားယူနိုင်မှုအခြေအနေကိုမူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်တွေ့ရှိပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အဓိကတန်ဖိုးကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုယူဆရသည်။166].
ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲသည်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းအခြားဖြစ်စဉ်များလည်းပါဝင်သည်။ အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဦး နှောက်တိုင်းတာမှုများသည်အစားအသောက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစာစားခြင်းအတွက် ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲခြင်းသည်အ ၀ လွန်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိန်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ Limbic / paralimbic andရိယာများနှင့် prefrontal cortex သည် BMI မြင့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်ကျသော function တစ်ခုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားစွာတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ အဝလွန်သူများသည် prefrontal cortex တွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် limbic နှင့် paralimbic areasရိယာများပိုမိုကြီးမားသော deactivation (frontal operculum, hippocampal ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ insula, orbitofrontal) cortex, ယာယီတိုင်), striatum, precuneus နှင့် cerebellum (ဥပမာ[167-169]) ။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် dopamine စနစ်၏အရေးပါမှုကို ထောက်၍ Wang et al ။  အလွန်အမင်းအဝလွန် (BMI2နှင့် 42 ကြားရှိ BMI) တွင် ဦး နှောက် dopamine D60 receptors ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရ striatal dopamine receptors သည်ဤတစ် ဦး ချင်းစီတွင်သိသိသာသာနိမ့်ကျပြီး D2 receptor level နှင့် BMI အကြားရှိပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် - ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုမြင့်မားသော BMI နှင့်ဆက်နွယ်သော receptors အနိမ့်အဆင့်များ။ အဆိုပါအဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီ၌ဤ dopamine ချို့တဲ့မှုသည်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည်ဤစနစ်များအတွက်လျော့နည်းသွား dopamine signal ကိုလျော်ကြေးပေးရန်ရောဂါဗေဒအစာကိုစားခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲစေခြင်းငှါ, စာရေးသူအကြံပြုခဲ့သည် တနည်းအားဖြင့်၊ dopamine D2 receptors များ၏အားနည်းချက်များကြောင့်ယေဘူယျအားဖြင့် dopamine system တွင်လျော့ချခြင်းသည်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအပေါ်အားနည်းခြင်း (သို့) ခန့်မှန်းခြင်းများအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်။11] ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Stice et al ။ ၏ (, ) အစားအစာစားသုံးနေစဉ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပိန်ကြုံသောလူတစ် ဦး ချင်းစီ၌လျော့ကျ caudate activation ၏တွေ့ရှိချက်များ dorsal striatum အတွက်လျှော့ dopamine အဲဒီ receptor ရရှိမှုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ အလားတူစွာမူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မတူကွဲပြားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းများအထိစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အထူးသဖြင့်ကိုကင်းတွင် striatal dopamine receptor များလျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့် dopamine စနစ်၏ရှင်းလင်းသောနှောင့်အယှက်များကိုပြသခဲ့ကြသည်။170-172] မက်သမ်ဖက်တမင်း [173, 174] အရက် [175-177] နီကိုတင်း  နှင့်ဘိန်းဖြူ  စွဲသူများ။ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်လျော့ကျသွားခြင်းကိုလည်းကိုကင်းတွင်တွေ့ရှိရသည်။170, 180] မက်သမ်ဖက်တမင်း [173, 181, 182] အရက်  နှင့်နီကိုတင်း  စွဲသူများ။
dopamine D2 receptor အဆင့်နိမ့်မှုနှင့် oatingating / အဝလွန်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်အကြားတိကျသောဆက်နွယ်မှုကိုကောင်းစွာမဖော်ပြနိုင်ပါ။ Volkow တွင် striatal dopamine D2 receptor ပမာဏသည်ယခင်ကထူထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် et al ။  ဒီရလဒ်ကိုအတည်ပြုပြီးဒီအားနည်းချက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာမှုပြုခဲ့တဲ့ prefrontal cortical ဦး နှောက်ဒေသတွေမှာအဝလွန်နေတဲ့လူတစ် ဦး ချင်းစီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမှာပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုရှိသည်။ အဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်ထိန်းချုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုသည် prefrontal ဒေသများရှိအစားအစာစားသုံးမှုအတွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (ဆိုလိုသည်မှာ dorsolateral prefrontal cortex, orbitofrontal cortex နှင့် anterior cingulate နှင့်လည်း somatosensory cortex ။ စာရေးသူများကအလွန်အကျွံစားခြင်းသည်အနိမ့် striatal dopamine D2 receptors ၏အကျိုးဆက်ကြောင့် inhibitory control တွင်ပါဝင်သော prefrontal ယန္တရားများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ striatal dopamine D2 receptors နှင့် somatosensory cortical ဇီဝြဖစ်အကြားဆက်စပ်မှုတိုးမြှင့်အစားအစာ palatability နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်ကိုထင်ဟပ်ထင်ခဲ့သည်။ အလားတူတွေ့ရှိချက်များနှင့် receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားဆက်စပ်မှုမူးယစ်ဆေးစွဲတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် [170, 174, 186] နှင့်ဤတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှု၏ဆုံးရှုံးမှု striatal dopamine function ကိုနှင့် orbitofrontal cortex ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့အကြံပြုခဲ့ကြသည်။
ဤလေ့လာမှုများအရ prefrontal ဒေသများရှိဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှုန်းလျော့ကျမှုသည်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုဒေသများသည်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်သိမြင်မှု / တားစီးထိန်းချုပ်မှုတို့တွင်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လိုငွေပြမှုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူမောင်းနှင်မှုအခြေအနေများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာရေးမကောင်းသောဆိုးကျိုးများရှိစေကာမူအရသာရှိသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းသို့မဟုတ်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွဲသုံးခြင်းကဲ့သို့သောအားဖြည့်အပြုအမူများကိုရပ်တန့်ရန်မတတ်စွမ်းနိုင်ပါ။ BMI နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်လတ်တလောအလုပ်သည် prefrontal ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကျန်းမာသောအရွယ်ရောက်သူများတွင် BMI နှင့်အခြေခံ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်စဉ်များအကြား prefrontal ဒေသများနှင့် anterior cingulate gyrus တို့တွင်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။187] နှင့်ထိုဒေသနှစ်ခုလုံးသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ရန်အထူးအကြံပြုထားသည်။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး prefrontal ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်နှုတ်ဖြင့်သင်ယူမှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်များအကြားအလားတူပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဝလွန်ခြင်းတွင်သိသိသာသာလျော့နည်းကျဆင်းလာသောဤတွေ့ရှိချက်သည်ကြီးထွားလာသောစာပေများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ BMI မြင့်မားခြင်းသည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများသာမကလူကြီးများတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်ကိုပြသသည်။ဥပမာ [188-191စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျှော့ချခြင်းနှင့်အဝလွန်သူတစ် ဦး ဦး အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချခြင်းအပါအဝင်]) ။192] ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာဤတွေ့ရှိချက်များကိုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၌မတွေ့ရပါ။193].
ဤရွေ့ကားအလုပ်လုပ်တဲ့တွေ့ရှိချက်အဝလွန်ခြင်းဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုအကဲဖြတ်ကြောင်းလေ့လာမှုများအတွက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အဝလွန်သူများအတွက် ဦး နှောက်ပမာဏကိုတစ်သမတ်တည်းအကဲဖြတ်ရာတွင်ပိန်သူတစ် ဦး ချင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချခြင်းသည် ဦး နှောက်areasရိယာများစွာတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ အရသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, ဆုလာဘ်များနှင့်တားစီးထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ postcentral gyrus, တိုကျရိုကျ operculum, putamen နှင့်အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyrus  ။ အလားတူစွာကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်အမြောက်အများ၏နမူနာတွင် BMI နှင့်ကမ္ဘာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ပမာဏအကြားသိသာထင်ရှားသောအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းယောက်ျားများတွင်သာတွေ့ရှိခဲ့သည်။195] ။ ဒီလေ့လာမှုကို BMI ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျန်းမာတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူများရဲ့ ဦး နှောက်ပမာဏကိုနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဝလွန်သူများသည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်အဝလွန်သူများထက်စုစုပေါင်း ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စစုစုပေါင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။196], နှင့်စာရေးဆရာများ ဦး နှောက်၌ဤ morphometric ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သိမြင် function ကိုနှင့် BMI အကြားပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အကောင့်အံ့သောငှါအကြံပြုခဲ့သည်။
အဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီ၌ဤတွေ့ရှိချက်တိုကျရိုကျ cortical ဒေသများရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန်ထုတ်ဖော်ပစ္စည်းဥစ္စာ - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မျှမျှတတကြီးမားတဲ့စာပေနှင့်အတူအလွန်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ polysubstance ချိုးဖောက်သူများအတွက် prefrontal cortical ဒေသများတွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှော့ချခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။197] frontal တွင် (cingulate gyrus, orbitofrontal cortex) insular နှင့် temporal cortical 198-201] နှင့် ဦး နှောက်ထဲမှာ  ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများရှိရာဒေသများ၊ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကိုမှီခိုနေရသူတစ် ဦး ချင်း၏ prefrontal၊ insular နှင့်ယာယီ cortical ဒေသများတွင် 203] ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ဤအလားတူစနစ်မျိုးစုံသည်ပါဝင်သောဆားကစ်များ၏အတိုင်းအတာနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုပြသသည်။
Summ အကျဉ်းချုပ် - စွဲခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်း
အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအခြေခံသည့် neurobiological စနစ်များကိုလေ့လာခြင်းသည်အချို့သောဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်ကိုပြသည်။ ဦး နှောက်ပုံရိပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သောသုတေသနပြုမှုများသည်အပြုအမူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်များပြောင်းလဲခြင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့ကိုအခြေခံသည့်အရေးကြီးသောကဏ္inများတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ neurobiological စနစ်များကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်သောပြုပြင်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသောအကျိုးဆက်အားဖြင့်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူများ (non- homeostatic စားသုံးမှု / မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှု) ကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောတူညီမှုများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ်ရှုထောင့်အသစ်များပေါ်ပေါက်လာပြီးကုသမှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်းအသစ်များနှင့်ကုသမှု (နှင့်ကာကွယ်ခြင်း) အတွက်မဟာဗျူဟာများပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သောတူညီမှုများသည် DSM-V အသစ်တွင်အဝလွန်ခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
IV ။ စွဲနှင့်လိင်, ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပူးတွဲမှု
လူစီအယ်လ်ဘရောင်း, Ph.D ဘွဲ့ကို
လိင်၊ အချစ်နှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှု - တစ်ခုချင်းစီတွင်စွဲလမ်းစေသောအရည်အသွေးများရှိသည်။ အားလုံးသည်လူ့မျိုးပွားမှုနည်းဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်; အားလုံးသည်တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများတွင်ဖော်ထုတ်ထားသော ဦး နှောက်ဆုချသည့်စနစ်များပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ Childress et al ။  စွဲသူများကတဏှာဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအချက်များနှင့်ကယ်လီကိုကြည့်သောအခါသဘာဝဆုလာဘ်စနစ်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။205] မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောစနစ်များသည်ဆုလာဘ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မည်သို့ဆက်နွယ်သည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်သဘာဝမဟာဗျူဟာ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်သည်စွဲရောဂါများအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါသလား။ လိင်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ပျော်ရွှင်မှုသည်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူပုံမှန်ပျော်မွေ့မှုခံစားမှုတစ်ခုလော။ ရောနှောနေမှု၏ရောင့်ရဲမှုနှင့်လုံခြုံမှုသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်း၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလား။ ရရှိနိုင်သည့်အထောက်အထားများအရပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးယန္တရားများနှင့်လိင်၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနသည်စွဲလမ်းမှုကိုသဘာဝနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မသန်မစွမ်းဖြစ်မှုအခြေအနေတွင်ထားရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုစဉ်ဆက်တစ်စွန်းတွင်ရှိသကဲ့သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ အလယ်အလတ်၌ဤအပြုအမူများလိုအပ်သည်။ အဆုံး၌, သူတို့သည်အန္တရာယ်နှင့်တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်များပေါ်တွင်အခြေပြုပါကနောက်ခံဇီဝကမ္မစနစ်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးမလိုအပ်သောအရာများဖြစ်သင့်သည်။ ဦး နှောက်အဆင့်များစွာတွင်တည်ရှိသင့်ပြီးအထူးသဖြင့်အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်ရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှု၊ မျိုးပွားရန်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားဆွဲဆောင်ခြင်း၊ မိခင်၊ ကလေးနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏တွယ်တာမှုတို့ကိုမည်သည့်အခါမျှ“ မေ့လျော့” မည်မဟုတ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်၎င်းမှတ်ဉာဏ်ကိုတည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့ရန်နှင့်လိင်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်ကိုထိန်းညှိရန်ခက်ခဲသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ပျက်စီးစေသောစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေရန်မော်လီကျူးဖြစ်ရပ်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည် 205, 206, 207] နှင့်စွဲလွယ်လွယ်လွယ်မှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့် [ဥပမာ 207, 208-210] လူအများစုအတွက်စနစ်များသည်ရှင်သန်ရန်အတွက်ပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပိုတက်စန်  သူ၏စက္ကူတွင်အရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သည့်အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်အသုံးဝင်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပေးသည်။ ၎င်းကို“ ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း” အဖြစ်ကောင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ အပြုအမူသည်ထကြွလွယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအတွက် Diagnostic စံသတ်မှတ်ချက်တွင်ဘဝ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ သည်းခံနိုင်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤဖော်ပြချက်များသည်လူ့လိင်နှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
မည်သည့်မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်လိင်လိုအပ်သည်။ လိင်လုပ်ရပ်သည်မျိုးပွားခြင်း၏နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရလိင်ကိုပျော်စရာဟုဖော်ပြပြီး၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အချို့လူများက၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းသည်ဟုဆိုကြသည်။212, 213] ။ ၎င်းသည်သူတို့၏အတွေးများနှင့်အချိန်ကိုများစွာသိမ်းပိုက်ထားသဖြင့်သူတို့၏ကျန်ဘ ၀ များအပေါ်အပျက်သဘောသက်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အဖျက်သဘောဆောင်သောအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်ထိန်းချုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူဖြစ်သည်။ လူ့ ဦး နှောက်ပုံရိပ်မှအထောက်အထားများအရလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်သည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ထိခိုက်ဒေသများသည် amygdala, ventral striatum (accumbens အပါအဝင်), medial prefrontal cortex နှင့် orbitofrontal cortex ဖြစ်ကြသည်။214-216] ။ ဤဒေသများအားလုံးသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည် 217, 218-220] ။ ထို့အပြင် ventral tegmental (ရိယာ (VTA) တွင်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးများအတွက်ရိပ်မိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်  ကိုကင်းဓာတ်မြင့်မားသောareaရိယာ  ။ ဆုလာဘ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသောနေရာများတွင်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများကို ventromedial hypothalamic areaရိယာ / tuberoinfundibulum, paraventricular n ။ , insular cortex နှင့် neocortical ဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။214-216, 222] ။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအတွင်း hypothalamic ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုသည် opioid receptors များပေါ်တွင်မူတည်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။223, 224] နှင့် norepinephrine [225, 226] ။ နောက်ဆုံးတွင် testosterone နှင့် estrogen သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ testosterone သည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစေနိုင်သည်။ Testosterone ဟော်မုန်းသည် ၄ ​​င်း၏အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည် တိရစ္ဆာန်များက၎င်းကိုကိုယ်တိုင်စီမံသည်227] ။ အချုပ်အားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင် mesolimbic ဆုလာဘ်များပါ ၀ င်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွင် opioid ပါဝင်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအခြေအနေတွင်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လိင်ဟော်မုန်းများ၏အခန်းကဏ္ on နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် hypothalamic ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုအလေးထားဘို့ခိုင်မာသောအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိ။
အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကြင်ဖော်ကိုရှာဖွေရန်နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုမောင်းနှင်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်ဟု Fisher ကယူဆခဲ့သည်။228, 229] လူ့မျိုးပွားမှုမဟာဗျူဟာနှင့်လူ့အပြုအမူအပေါ်ကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ခြင်း။ အချစ်၏အစောပိုင်းအဆင့်ရှိသူများသည်စွဲလမ်းသောလက္ခဏာများကိုမကြာခဏပြလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကသူတစ်ပါးရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုခံရတယ်။ သူတို့ဟာထကြွလွယ်သောအရာ၊ သူတို့၏အတွေးနှင့်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ သူတို့ချစ်ရာသခင်နှင့်အတူမိသားစုစွန့်ခွာလိမ့်မည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်သူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်နှင့်အမျှသူတို့ကလူသတ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကသူတို့နှင့်အခြားသူများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဦး နှောက်မြေပုံလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်အရအစောပိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားအလယ်အလတ် ဦး နှောက်နှင့် caudate နျူကလိယ၏ VTA ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ဆုလာဘ်နှင့်မောင်းနှင်မှုကိုကြားဝင်စေသော ဦး နှောက်စနစ်များကိုအသုံးပြုသည်၊ ရှင်သန်မှုလှုံ့ဆော်မှု  ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပါဝင်သူများလည်း amygdala အတွက်ပိတ်ထားပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆက်ဆံရေးကြာကြာ, အ ventral pallidum နှင့် insular cortex အတွက်ပိုမိုလှုပ်ရှားမှု  ။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသောငယ်ရွယ်သောလူကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုခဲ့သည်။231] သည်ပွဲတစ်ပွဲသည်အခြားသူတစ် ဦး အတွက်အကြီးမြတ်ဆုံး "စွဲလမ်းမှု" ကိုပြသခြင်း၊ တဏှာကိုခံစားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းညံ့ဖျင်းခြင်း၊ နာကျင်စေသောအကျိုးသက်ရောက်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ ၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် VTA ကိုစတင်လှုပ်ရှားမှုသည်အစောပိုင်းအဆင့်စိတ်ကူးယဉ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖွဲ့နှင့်ဆင်တူသည်။ ရည်းစား၏မျက်မြင်သက်သေသည် ဆက်လက်၍၊ accumbens နျူကလိယနှင့် Risinger et al ရှိရာဒေသများ၌လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေသည်။  ကိုကင်းဆေးစွဲသူများ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားareasရိယာ accumbens core ကို, အ accumbens-ventral pallidum areaရိယာနှင့်အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyrus အတွက်နက်ရှိုင်းသောincludeရိယာပါဝင်သည် .
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုများ (ပျမ်းမျှအားဖြင့်နှစ် ၂၀) နှင့်အတူရှိခဲ့သောအစောပိုင်းအဆင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မြင့်မားသည်ဟုခံစားခဲ့ရသောအုပ်စုတစ်စုကိုကြည့်ခဲ့သည်။233] သူတို့လည်းသူတို့ချစ်သောသူကိုကြည့်သောအခါသူတို့၏ VTA တွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများတွင်မြူမြူပေါက်ဝဲလွင်ပြင်များ၌အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းပြသည့်ဒေသများနှင့် accumbens နှင့် ventral pallidum တို့ပါဝင်သည်။234, 235] ။ ထို့အပြင်ရေရှည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အတွေ့အကြုံသည် stria terminalis ၏အိပ်ရာနူကလီးယပ်စ်နှင့် hypothalamus ၏ paraventricular nuclei ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သက်တမ်းကြာရှည်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ ၀ င်သည့် oxytocin ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဟော်မုန်းစနစ်များပါဝင်နိုင်သည်။ နှင့် vasopressin ။ ဤဟော်မုန်းနှစ်မျိုးသည်သက်ဆိုင်မှုရှိအတွဲစုံတွဲဖက်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။234, 235].
အချုပ်အားဖြင့်အချစ်၏ခံစားချက်များသည်ဆုလာဘ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုစနစ်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွေ့အကြုံ၏အခြေအနေများတွင်တစ်သမတ်တည်းအသုံးပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အလွဲသုံးစားပြုသည့်နည်းတူချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် obsessive အပြုအမူများပါ ၀ င်ပြီးအသက်များကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။ လိင်ကဲ့သို့ပင်အချစ်တွင် hypothalamic hormone control systems ပါဝင်သည်။ လိင်ကဲ့သို့၎င်းသည် midbrain၊ hypothalamic နှင့် ventral striatum အဆင့်များ၌လုပ်ဆောင်သည်။ ဆုနှင့်ဆက်နွယ်သော subcortical area များကိုအသုံးပြုသည်။
မိခင်နှင့်ကလေးဆက်ဆံရေးသည်ပူးတွဲမှုစနစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်မှုအတွက်ပူးတွဲမှုအပြုအမူ၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြသည်။236, 237] ။ Strathearn et al ။  မိခင်များကိုသူတို့၏နို့စို့ကလေး၏မျက်နှာများကိုကြည့်နေသောမိခင်များကိုလေ့လာရန် fMRI ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမြင့်မားခြင်းနှင့်တပ်မက်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများရှိမသိသောကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိခင်များ၏ကလေးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ VTA၊ amygdala, accumbens, insula, medial prefrontal cortex နှင့် orbitofrontal cortex ။ သူတို့ကအစ hypothalamic activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်238] သို့သော်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ကွဲပြားသောinရိယာ၌  နှင့်ရေရှည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ .
ဖလိုရစ္စကမူစွဲလမ်းမှုသည်ပူးတွဲပါသောရောဂါဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။239, 240] ။ သူသည် Bowlby ၏ (၁၉၇၃) အခိုင်အမာကို အသုံးပြု၍ ပူးတွဲခြင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်မောင်းနှင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နို့တိုက်သတ္တဝါများရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သာမန်တွယ်တာမှုမရှိပါကစိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ပြီးလူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်စွဲလမ်းစေနိုင်သောအပြုအမူများကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အထီးကျန်ဆန်သောမျောက်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခက်အခဲများရှိလာသည်။ သို့သော်အစားအစာနှင့်ရေကိုသောက်သုံးခြင်း၊ သာမန်မျောက်များထက်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း [ဥပမာ။ 241] ။ အိမ်ထောင်ဖက်ဆုံးပါးသွားသောလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လူ ဦး ရေထက်သေခြင်းကို ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။ ပထမနှစ်တွင်သေဆုံးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအရက်နှင့်ဆိုင်သောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည်။242] ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်စွဲလမ်းမှုကုသမှုတွင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။240] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောင်မြင်သောကုသမှုနည်းလမ်းများသည်အရက်သေစာမသိသောပရိုဂရမ်ကဲ့သို့သောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကျန်းမာသောလူမှုဆက်ဆံရေးကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အတူတကွနှင့်စွဲ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အတူကင်းကွာနှင့်အထီးကျန်သံသရာကိုချိုးဖျက်ဖို့, အုပ်စုတစ်စုကုထုံးအထူးသဖြင့်ကုထုံးနိုင်ပါတယ်, နှင့်လုံခြုံပူးတွဲမှု၏အတွေ့အကြုံပိုကောင်း Self- စည်းမျဉ်းထုတ်လုပ်ရန်ပုံပေါ်  ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုကုသမှုနှင့်၎င်း၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများသည်၎င်းအားအနာဂတ်လေ့လာမှုအတွက်အထူးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဆုလာဘ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲ, တပ်မက်သောစိတ်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပူးတွဲပါ
ဦး နှောက်မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလေ့လာမှုများသည်ပြင်းထန်သောဆေးထိုးသွင်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရလဒ်များအားဆုလာဘ်စနစ်များရှိအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာခဲ့သည် 204, 218, 221, 243] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များ (လိင်ဆိုင်ရာအရာများ) ၏အခြေအနေနှစ်ခုအောက်တွင်ကိုကင်းဆေးစွဲသူများအားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဒီမဂဒလကိုပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးတွင်ထိခိုက်ခဲ့သည်။244] ။ amygdala လိင်စိတ်နှိုးဆွ, အော်ဂဇင်, ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပူးတွဲမှုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်215, 216, 230, 238] ။ “ မြင့်မားသော” ကိုကင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောရိယာများမှာ VTA၊ amygdala, accumbens (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှု)၊ orbitofrontal နှင့် insular cortex ဖြစ်သည်။221, 243] ။ ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောAreရိယာများသည် accumbens, ventral pallidum နှင့် orbitofrontal cortex တို့ဖြစ်သည်။221, 243] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမြင့်မားခြင်းနှင့်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဤဒေသများသည်လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မျိုးဆက်ပွားစနစ်ဆုလာဘ်စနစ်များအကြားခြားနားချက်များသည် ventral pallidum တွင်ဖြစ်ပြီး၊ မိခင်များကသူတို့၏ကလေး၏ရုပ်ပုံကိုအသက်သွင်းခြင်း၊ လိင်၊ ကိုကင်းသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာများထက် ပို၍ ရှေ့ပိုင်းနှင့် dorsal ပိုမိုများပြားသည်။ ထို့အပြင်လိင်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ventral striatum ၏နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။244] ။ ထို့ကြောင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်များသည်ဆုလာဘ်areasရိယာများ၏အခြားသောဒေသများသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအလွှာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။
ဦး နှောက်ပုံရိပ်အားလိင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်သဘာဝ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အဓိကကျသည့်တိုးချဲ့ထားသော်လည်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောစနစ်အတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်ရှင်သန်မှုစနစ်များကို ဦး နှောက်၊ hypothalamus၊ striatum၊ insular နှင့် orbitofrontal / prefrontal cortex တစ်လျှောက်တွင်ဖြန့်ဝေသည်။ မျိုးပွားနိုင်စွမ်း၊ ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်ရေချိန်ခွင်လျှာတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟော်မုန်းများကိုထိန်းချုပ်သော ဦး နှောက်နယ်ပယ်များနှင့် dopamine နှင့် opioids ကြွယ်ဝသော ဦး နှောက်ဒေသများပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တွယ်ကပ်တွယ်မှုများတွင်ပါဝင်သောဂန္ထဝင်ဆုလာဘ်များနှင့်ထပ်တူထပ်မျှ (VTA, accumbens, amygdala, ventral pallidum, orbitofrontal cortex) ။ ဦး နှောက်ပုံရိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော hypothalamic နှင့် hormonal control area များကိုမပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်ကောင်းရှိနိုင်ပြီးသုတေသနအတွက်ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ အဓိကစာတမ်းမှာဤနေရာတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်စနစ်များကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်များဖြစ်သောကြောင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများစွာလိုအပ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတွေကိုတုံ့ပြန်ရန် ဦး နှောက်၏ဘေးထွက်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ accumbens နှင့် orbitofrontal cortex စသည့်ကြီးမားသောinရိယာများတွင်ကွဲပြားသော activated subregions များရှိသည်။ သို့သော်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုမှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဆင့်သဘာဝဆုများကိုပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်၊ ဦး နှောက်စနစ်များကိုကုထုံးတွင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အပြုအမူများ၏လိုအပ်သောဇွဲရှိမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
ဤစာရေးဆရာသုံး ဦး ၏ဖော်ပြချက်အရအစွမ်းထက်သော ဦး နှောက်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကိရိယာများရရှိမှုသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးအဆင့်တွင်ခေတ်သစ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်ကရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲစာအုပ်များတီထွင်ပြီးကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် "စွဲလမ်းမှု" ကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ဆေးဝါးများသုံးစွဲရန်မလိုအပ်ပါ။ sine qua မဟုတ်တဲ့ အမျိုးအစားအဘို့။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်နယ်နိမိတ်များကိုတ္ထုများထက် ကျော်လွန်၍ ထွင်းထားလိမ့်မည်။ အတိအကျမရှင်းလင်းသေးသောနေရာအတိအကျ - သို့သော်စာရေးသူများပြသထားသည့်အတိုင်းပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောဆုများရရန်အတွက် ဦး နှောက်အားနည်းချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ရောဂါရှာဖွေရေးနယ်နိမိတ်များကိုသာမက၊ ဤခက်ခဲသောရောဂါများကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်သောရောဂါရှာဖွေရေးနယ်နိမိတ်များ၏မျှော်လင့်ထားသည့်လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ“ Cross-over” ဆေးဝါးများကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည် - ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသောပစ္စည်းများကိုအေးဂျင့်များမဟုတ်သောရောဂါများတွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် opioid antagonist naltrexone ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အကျိုးရှိစေသောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။245] (နှင့်ကော့ကေးဆပ်အထီးအရက်သောက်ခြင်း၏မျိုးရိုးဗီဇခွဲအုပ်စုတစ်စုအတွက် 246]) ယခုလောင်းကစားအတွက်ကုထုံးတစ်ခုအဖြစ်စမ်းသပ်ခြင်းခံရသည်။18] နှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် (bupropion နှင့်အတူ) ပေါင်းစပ်ကုထုံးအဖြစ်  ။ ထိုကဲ့သို့သော baclofen အဖြစ် GABA B ကို agonists preclinical ပြသခဲ့သည် (ကိုကင်း, opiates, အရက်နှင့်နီကိုတင်း,248-251]) နှင့်လက်တွေ့ [252-255] မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကတိပေးသော်လည်းအလွန်အရသာရှိသည့် (အထူးသဖြင့်အဆီများသော) အစားအစာများကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းအတွက်ကန့်လန့်ဖြတ်ကျော်ကတိက ၀ တ်ရှိသည်။75, 256]  ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် orexin antagonists ကဲ့သို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းအသစ်များသည်အစကန ဦး စားနပ်ရိက္ခာဆုိုင်ရာအစီအစဉ်များတွင်လေ့လာခဲ့သော်လည်းကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူဆုများအပါအ ၀ င်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။258-260].
အနာဂတ်စွဲဆေး nosology ၏ပန်းပုဆရာများသည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်၎င်း၏နယ်နိမိတ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီရန်ဤ“ Cross-over” ကုထုံးမှရလဒ်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထိရောက်သော၊ တိကျသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုများသည်ရောဂါရှာဖွေရေးနယ်နိမိတ်များကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီလေ့ရှိသည်။ အချက်တစ်ချက်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုတို့၏သမိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ serotonin- တိကျတဲ့ပြန်လည်သိမ်းဆည်း inhibitors မကြာခဏစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးကိုပြသသကဲ့သို့, ဤရောဂါပို။ ပို။ ထပ်တူ "ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ" ထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း dichotomous မမှန်အဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။ ဒါဟာတူညီသောဇီဝဗေဒကြားဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်မဟုတ်သောပစ္စည်းဆုလာဘ်များ၏အတင်းအကျပ်လိုက်စားဆန့်ကျင်ထိရောက်သောလျှင်, စွဲအလားတူ re- ထွင်းထုခြင်းကိုခံယူစေခြင်းငှါမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ nosology သည်ယခုအချိန်အထိဤပြcompနာများကိုခွဲခြားထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့သုတေသနနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်အဆစ်အသစ်တစ်ခုကိုမကြာခဏစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
စာရေးသူများသည်ဒေါက်တာများမှစီစဉ်။ ပူးတွဲဥက္က “္ဌ“ ဒုနှင့်အမျိုးသား - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုများ (စားနပ်ရိက္ခာ၊ လိင်၊ လောင်းကစား) ဆုလာဘ်များအတွက်” ဆုချီးမြှင့်သည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာ၏ပဏာမဗားရှင်းများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အသက် ၇၀ အရွယ်ကလေးသူငယ်နှင့် Potenzath San Juan၊ Puerto Rico ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုပြProbleနာများဆိုင်ရာကောလိပ်၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး (ဇွန် ၁၄-၁၉၊ ၂၀၀၈) ။ စာရေးသူများသည်သူ၏လက်စွဲစာအုပ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့်မှတ်ချက်များအတွက်ဒေါက်တာဂျော့ခ်ျ Uhl နှင့်တစ်လျှောက်လုံးသူ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
1. Jowett B. ပလေတို၏ဆွေးနွေးပွဲများ: Phaedrus ။ နယူးယောက်: ကျပန်းအိမ်; ၁၉၃၇ ။
2. Saunders JB, Schuckit MA ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ Diagnostic နှင့် Statistical Manual တွင်ပဉ္စမထုတ်ဝေမှု (DSM-V) စွဲ၌ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြdisနာများရှာဖွေခြင်းအတွက်သုတေသနအစီအစဉ်တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1): 1-5 ။ [PubMed]
Nomenclature နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာအသင်းကော်မတီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ ၁။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ - အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံဝန်ဆောင်မှု၊ ၁၉၅၂ ။
4. Nomenclature နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှကော်မတီ။ DSM II: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ ၁၉၆၈ ။
Nomenclature နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာအသင်းကော်မတီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, DSM III ကို။ 5. ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း;3။
6. Weintraub: D ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine agonist ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ Arch Neurol ။ 2006; 63 (7): 969-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. Weintraub: D ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိမလိုမုန်းတီးမှုဆိုင်ရာမသန်မစွမ်းသောရောဂါများအတွက်မေးခွန်းလွှာကိုအတည်ပြုခြင်း။ Mov Disord ။ 2009; 24 (10): 1461-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8. Potenza MN ။ စွဲလမ်းစေသောရောဂါများသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအခြေအနေများပါ ၀ င်သင့်သလား။ စွဲ။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1): 142-51 ။ [PubMed]
9 ။ Volkow ND, ပညာရှိ RA ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ် neuroscience ။ 2005; 8 (5): 555-560 ။ [PubMed]
၁၀။ Volkow ND၊ O'Brien CP ။ DSM-V အတွက်ပြနာများ - အဝလွန်ခြင်းကို ဦး နှောက်ရောဂါအဖြစ်ထည့်သွင်းသင့်သလား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 10; 2007 (164): 5-708 ။ [PubMed]
et al 11. ဝမ် GJ ။ neurofunctional ပုံရိပ်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲအကြားတူညီ: အယူအဆပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုစွဲ Dis ။ 2004; 23 (3): 39-53 ။ [PubMed]
12. Gosnell BA, Levine AS ။ ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု - opioids ၏အခန်းကဏ္။ ။ Int J ကို Obes (Lond) 2009; 33 (ပျော့ပျောင်း 2): S54-8 ။ [PubMed]
et al 13. Kelley AE ။ အဆိုပါ ventral striatum အတွင်းအရသာ hedonics ၏ Opioid မော်ဂျူ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2002; 76 (3): 365-377 ။ [PubMed]
et al 14. Drewnowski တစ် ဦး ။ ချိုမြိန်သောအဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများအတွက်အရသာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် ဦး စားပေးမှုများ - opioid ပါဝင်မှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Physiol Behav ။ 1992; 51 (2): 371-9 ။ [PubMed]
15. Potenza အမ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: အတိတ်မှလက်ရှိပြProbleနာ။ [ဝင်ရောက်ခဲ့နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၁]; www.psychiatrictimes.com/srpg.html(စက်တင်ဘာ ၂၀၀၁ တွင်အွန်လိုင်းသီးသန့်)
nomenclature နှင့်စာရင်းအင်းများအပေါ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၏ကော်မတီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ ၄။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ - အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ 16 စာသားတည်းဖြတ်မူ။
17. Tavares H ကို, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်အရက်သမားအကြားတဏှာ၏နှိုင်းယှဉ်။ အယ်လ် Clin Exp Res ။ 2005; 29: 1427-1431 ။ [PubMed]
18. Grant က JE, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားကုသမှုအတွက် opiate ရန်ဘက်ပြုသူများနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာတုံ့ပြန်မှုကိုခန့်မှန်းခြင်း။ Psychopharmacol ။ စာနယ်ဇင်းအတွက်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၁၉ ။ Brewer JA၊ Grant JE, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှု။ စွဲရောဂါများကုသမှု။ 19; 2008: 7-1 ။
20. Cunningham-Williams က RM ။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီး: ပြProbleနာလောင်းကစားသမားများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးမမှန် - စိန့်လူးဝစ်ကူးစက်ရောဂါဖမ်းမိAreaရိယာလေ့လာမှုမှရလဒ်များ။ Am J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 1998; 88 (7): 1093-1096 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၂၁။ Petry NM, Stinson FS, Grant BF ။ DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများကိုပူးတွဲရောဂါကူးစက်စေခြင်း - အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားကူးစက်ရောဂါစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 21; 2005: 66-564 ။ [PubMed]
22. Wagner က F, အန်သိုနီ JC ။ ပထမဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုအထိ - ဆေးခြောက်၊ ကိုကင်းနှင့်အရက်တို့အပေါ်မှီခိုရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုကာလ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 479-488 ။ [PubMed]
23. Potenza MN ။ စွဲလမ်းစေသောရောဂါများသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအခြေအနေများပါ ၀ င်သင့်သလား။ စွဲ။ 2006; 101 (s1): 142-151 ။ [PubMed]
24. Lynch W, Maciejewski PK, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လောင်းကစားအရွယ်၏အရွယ်အလိုက်လူကြီးလူငယ်များအတွက်လောင်းကစားခြင်း၏စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 61: 1116-1122 ။ [PubMed]
et al 25. Kessler RC ။ အမျိုးသား Comorbidity စစ်တမ်းပွားအတွက် DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Med ။ 2008; 38: 1351-1360 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26. Potenza MN ။ လောင်းကစားလိုင်စင်ကို သုံး၍ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ကျား၊ မဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 1500-1505 ။ [PubMed]
၂၇။ Tavares H, Zilberman ML, Beites FJ, Gentil V. လောင်းကစားတိုးတက်မှုနှင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများ။ J ကိုလောင်းကစားလုံး။ 27; 2001: 17-151 ။ [PubMed]
28. Piazza N ကို, Vrbka JL, Yaeger RD ။ အမျိုးသမီးအရက်သမားအရက်၏အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း။ Int J ကိုစွဲ။ 1989; 24: 19-28 ။ [PubMed]
၂၉။ Tsuang M၊ Lyons MJ, Meyer JM, Doyle T, Eisen SA, Goldberg J, True W, Lin N, Toomey R, Eaves L. အမျိုးသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးအလွဲသုံးစားပြုခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 29; 1998: 55-967 ။ [PubMed]
et al 30. Eisen လုပ် SA ။ လောင်းကစားအပြုအမူအပေါ်မိသားစုလွှမ်းမိုးမှု: 3359 အမွှာအားလုံးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲ။ 1998; 93: 1375-1384 ။ [PubMed]
31 al Kendler K ။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဘုံစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များဖွဲ့စည်းပုံ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2003; 60 (9): 929-937 ။ [PubMed]
et al 32 Slutske WS ။ အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီခိုခြင်းတို့အတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 57: 666-674 ။ [PubMed]
et al 33 Slutske WS ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လူမှုရေးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအကြားဆက်စပ်မှု၏တစ် ဦး အမွှာလေ့လာမှု။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ။ 2001; 110: 297-308 ။ [PubMed]
et al 34. Kreek MJ ။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ စွန့်စားရမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတို့အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုများ။ သဘာဝ Neurosci ။ 2005; 8: 1450-1457 ။ [PubMed]
35. Brewer JA, Potenza MN ။ Neurobiology နှင့် Impulse Control Disorders ၏မျိုးရိုးဗီဇ - မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်း။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးဆေးဝါးဗေဒ။ 2008; 75: 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ လာ DE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ CNS Spectrum ။ 1998;3(6): 20-37 ။
et al 37 da Silva Lobo DS ။ dopamine ဗီဇနှင့်စိတ်တိုးပွား sib-အားလုံးအတွက်အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ J ကိုလောင်းကစားလုံး။ 2007; 23: 421-433 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် 38. Blaszczynski တစ် ဦး က, သံမဏိ Z ကို, McConaghy N. Impulsivity: အလူမှုရေး impulsivist ။ စွဲ။ 1997; 92 (1): 75-87 ။ [PubMed]
39. Petry မိုင်။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ထကြွလွယ်သော။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2001; 63: 29-38 ။ [PubMed]
40. Petry N. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းမမှန်မှုများနှင့်မပါ ၀ င်ခြင်း၊ လျှော့စျေးသည်မြင့်မားသောနှုန်းထားဖြင့်ဆုလာဘ်များကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ။ 2001; 110: 482-487 ။ [PubMed]
41 al Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု fMRI stroop လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1990-1994 ။ [PubMed]
et al 42 Cavedini P ကို။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် front-lobe ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 51: 334-341 ။ [PubMed]
43. Bechara A. အန္တရာယ်များသောစီးပွားရေး - စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှု။ J ကိုလောင်းကစားလုံး။ 2003; 19: 23-51 ။ [PubMed]
et al 44 Goudriaan AE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များကို: အရက်မှီခို, Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ စွဲ။ 2006; 101: 534-547 ။ [PubMed]
45. လောရင့် AJ ။ ပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများသည်အရက်ကိုမှီခိုနေရသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မဆုတ်မနစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လိုငွေပြမှုကိုမျှဝေသည်။ စွဲ။ စာနယ်ဇင်းအတွက်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46. ​​Crews FT ။ အရက် neurobiology: မှီခိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005; 29: 1504-1513 ။ [PubMed]
et al 47 Beveridge TJR ။ လူသားများနှင့်မျောက်များတွင်ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်လေ့လာခြင်း။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော်တော်ဝင် Soc ခ 2008; 363: 3257-3266 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48. Nasrallah NA, Yang TWH, Bernstein IL ။ ဆယ်ကျော်သက်အရက်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း။ ဦး နှောက်သုတေသနအပေါ်ဆောင်းရာသီညီလာခံ; 2009; ကြေးနီတောင်တန်း CO, CO ။
et al 49. Reuter J ကို။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏ activation လျှော့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သဘာဝအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 8: 147-148 ။ [PubMed]
et al 50. Wrase J ကို။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuroimage ။ 2007; 35: 787-794 ။ [PubMed]
51 et al Pearlson GD ။ Neuropsychopharmacology ၏အမေရိကန်ကောလိပ်။ Boca Raton, FL: 2007. ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုလာဘ်အစီအစဉ် - fMRI အခြေပြုလေ့လာမှု။
အဖြစ်အပျက် -related fMRI နှင့်အတူဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်၏ 52 Knutson B, Fong GW, အဒမ် CM, Varner JL, Hommer D. Dissociation ။ နေပြည်တော်။ 2001; 12: 3683-3687 ။ [PubMed]
53 ။ Knutson B, Fong သည် GW, Bennett က SM, အဒမ် CM, Hommer ဃ mesial prefrontal cortex ပုဒ် monetarily ကြိုးရလဒ်များတစ်ဒေသ: လျင်မြန်စွာဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Neuroimage ။ 2003; 18: 263-272 ။ [PubMed]
et al 54 Potenza MN ။ လောင်းကစားခြင်းသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအားတိုက်တွန်းခြင်း - fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 60: 828-836 ။ [PubMed]
et al 55 Tanabe J ကို။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အချိန်တွင်ကြိုတင်မြင်ကွင်း Cortex လှုပ်ရှားမှုကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့် ၀ တ္ထုများအသုံးပြုခြင်းတွင်လျှော့ချသည်။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2007; 28: 1276-1286 ။ [PubMed]
56. ရော်ဂျာ R. ပြobservedနာ - လောင်းကစားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိအမူအကျင့်များနှင့်သိမြင်ဘက်လိုက်မှုအချို့၏အာရုံကြောအလွှာ။ ဦး နှောက်သုတေသနအပေါ်ဆောင်းရာသီညီလာခံ; 2009; ကြေးနီတောင်တန်း CO, CO ။
et al 57 Campbell-Meiklejohn DK ။ ဘယ်အချိန်မှာရပ်ရမယ်ဆိုတာသိခြင်း - ဆုံးရှုံးမှုကိုလိုက်ဖမ်းခြင်းရဲ့ ဦး နှောက်ယန္တရား။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 293-300 ။ [PubMed]
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုသမှုကိုရှာဖွေနေသည့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအားလောင်းကစားသူ၏လောင်းကစားသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်မှုများ 58. Petry N. စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2003; 28: 1049-1062 ။ [PubMed]
59. Petry မိုင်။ လောင်းကစားသမားများအတွက်အမည်မသိနှင့်သိမှု - အပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးများ။ J ကိုလောင်းကစားလုံး။ 2005; 21: 27-33 ။ [PubMed]
et al 60 Petry မိုင်၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်သိမှု - အပြုအမူကုထုံး။ J ကို Clin Clin စိတ်ပညာ Consult ။ 2006; 74: 555-567 ။ [PubMed]
61 Petry မိုင်, ပြproblemနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်အကျဉ်းကြားဝင်၏ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin Clin စိတ်ပညာ Consult ။ 2008; 76: 318-328 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးသူများကို ၁၉၉၅ နှင့်အတူ 62 Miller W. Motivational တိုးမြှင့်ကုထုံး [၂၀၀၅ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ကိုကိုးကား]; ကနေရရှိနိုင် http://motivationalinterview.org/clinical/METDrugAbuse.PDF.
63. Hodgins: D, Currie SR, el-Guebaly N. Motivational enhancement နှင့်ပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသခြင်း။ J Clin Clin စိတ်ပညာကိုတိုင်ပင်။ 2001; 69: 50-57 ။ [PubMed]
64. Pettinati H, Oslin: D, serotonin နှင့် Decker K. ၏အခန်းကဏ္ and နှင့်အရက်မှီခိုမှုအတွက် serotonin - ရွေးချယ်ဆေးဝါးကုထုံး။ CNS Spectrums 2000;5(2): 33-46 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၏ Grant J, Kim SW, Potenza MN, Blanco C, Ibanez A, Stevens LC, Zaninelli R. Paroxetine ကုသမှု Int Clin Psychopharmacol ။ 65; 2003: 18-243 ။ [PubMed]
66 ။ Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
et al 67. Hedley AA ကို။ အမေရိကန်ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားအဝလွန်ခြင်းနှင့်အ ၀ လွန်မှုပျံ့နှံ့မှု၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၂ ။ ဂျမေ 1999; 2002 (2004): 291-23 ။ [PubMed]
68. Ogden CL, ကာရိုးလ် MD, တရားမဝင် KM ။ အမေရိကန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအသက်အရွယ်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း၊ ၂၀၀၃–၂၀၀၆ ။ ဂျမေ 2003; 2006 (2008): 299-20 ။ [PubMed]
69. Haslam DW, James WPT ။ အဝလွန်ခြင်း။ The Lancet ။ 2005; 366 (9492): 1197-1209 ။ [PubMed]
70 Yach: D, Stuckler: D, Brownell KD ။ ကမ္ဘာ့အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါ၏ကူးစက်ရောဂါနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးဆက်များ။ နတ် Med ။ 2006; 12 (1): 62-66 ။ [PubMed]
71 Gearhardt AN, Corbin WR, Brownell KD ။ အစားအစာစွဲ - မှီခိုမှုအတွက် Diagnostic သတ်မှတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း။ J ကိုစွဲ Med ။ 2009;3(1): 1-6 ။ [PubMed]
72. Cocores ဂျေအေ၊ ရွှေက MS ။ ဆားငန်စားစွဲလမ်းမှုအယူအဆသည်အလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းပြန့်ပွားမှုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယူဆချက်။ စာနယ်ဇင်းခုနှစ်တွင် 2009 ခုနှစ်, သက်သေပြတညျ့။ [PubMed]
et al 73. Ifland JR ။ သန့်ရှင်းသောအစားအစာစွဲ - ပုံမှန်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယူဆချက်။ 2009; 72 (5): 518-526 ။ [PubMed]
74 Devlin MJ ။ DSM-V တွင်အဝလွန်ခြင်းအတွက်နေရာရှိသလား။ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2007; 40 (S3): S83-S88 ။ [PubMed]
75 Corwin RL, Grigson PS ။ စာတမ်းဖတ်ပွဲခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - အစားအစာစွဲခြင်း - အဖြစ်မှန်လော၊ J Nutr ။ 2009; 139 (3): 617-619 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76. Dagher A. အစာစားချင်စိတ်၏ neurobiology: စွဲလမ်းအဖြစ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု။ Int J Obes ။ 2009; 33 (S2): S30-S33 ။ [PubMed]
77. ရွှေက MS, et al ။ အစားအသောက်စွဲလမ်းလား။ J ကိုစွဲ Med ။ 2009;3(1): 42-44 ။ [PubMed]
78. Rolls ET ။ အစာစားခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ အဝလွန်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ။ 2007; 8 (s1): 67-72 ။ [PubMed]
79. ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ သဘာဝဆုကျေးဇူးများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - စွဲလမ်းစေသောဆေးဝါးများနှင့်သက်ဆိုင်မှု။ J ကို Neurosci ။ 2002; 22 (9): 3306-3311 ။ [PubMed]
80. O'Doherty JP ။ လူ့ ဦး နှောက်တွင်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဆုချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှုဆု - neuroimaging မှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2004; 14 (6): 769-776 ။ [PubMed]
81. Saper သမဝါယမ, Chou TC, Elmquist JK ။ အစာကျွေးရန်လိုအပ်ချက် - အစာစားခြင်းကို homeostatic နှင့် Hedonic ထိန်းချုပ်မှု။ Neuron ။ 2002; 36 (2): 199-211 ။ [PubMed]
82. Valentin VV၊ Dickinson A၊ O'Doherty JP ။ လူ့ ဦး နှောက်တွင်ရည်မှန်းချက်လမ်းညွှန်သင်ကြားမှု၏အာရုံကြောအလွှာများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။ J ကို Neurosci ။ 2007; 27 (15): 4019-4026 ။ [PubMed]
83. O'Doherty ဂျေ Lights, Camembert, လှုပ်ရှားမှု! Encoding Stimuli, Rewards and Choices in Human Orbitofrontal Cortex ၏အခန်းကဏ္။ ။ နယူးယောက်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, 2007 1121: 254-272 ။ (ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Orbitofrontal Cortex ၏အရေးပါသောပံ့ပိုးမှုများ) [PubMed]
84. Roberts သည် DC, Corcoran ME, Fibiger HC ။ ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self- အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တက် catecholaminergic စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ကိုအပေါ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1977;6(6): 615-620 ။ [PubMed]
85 ။ di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1988; 85 (14): 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86 Bradberry CW ။ ကိုကိုးအသုံးပြုမှုကိုမဟုတ်သောလူသားမဟုတ်သည့်စံပြပုံစံတွင်အကြီးနှင့်နာတာရှည် Dopamine ဒိုင်းနမစ်။ J ကို Neurosci ။ 2000; 20 (18): 7109-7115 ။ [PubMed]
et al 87 Carboni အီး။ အမ်ဖီတမင်း၊ ကိုကင်း၊ ဖီလင်စီလီဒင်းနှင့် nomifensine တို့သည်နျူးကလီးယပ်စ်၌လွတ်လပ်စွာရွေ့လျားနေသောကြွက်များကိုအပိုဆောင်းဆဲလ် dopamine ပါဝင်မှုကိုတိုးစေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1989; 28 (3): 653-661 ။ [PubMed]
et al 88 Di Chiara, G ။ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ဖြည့်စွက် 1): 227-241 ။ [PubMed]
89 McCullough LD, Salamone JD ။ microdialysis နှင့်အပြုအမူလေ့လာမှု: နျူကလိယ၏ပါဝင်မှုသည် Periodic အစားအစာတင်ဆက်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအတွက် dopamine accumbens ။ ဦး နှောက်သုတေသန။ 1992a; 592 (1-2): 29-36 ။ [PubMed]
ကြွက်များ၏နျူကလိယ၏ "အမာခံ" နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက '' shell '' တွင် extracellular dopamine တိုးမြှင့်ခြင်းကို Pontieri FE၊ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ 90; 1995 (92): 26-12304 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 91 Ritz MC ။ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကိုကင်းဓာတ်ပြုမှုသည်ကိုကင်းအားမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သိပ္ပံ 1987; 237 (4819): 1219-1223 ။ [PubMed]
92. Ritz MC, et al ။ ကိုကိုး၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို dopamine စားသုံးမှုတားစီးခြင်းဖြင့်ဖျန်ဖြေပေးခဲ့သည်။ Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988; 12 (2-3): 233-239 ။ [PubMed]
93. Spanagel R ကို, Weiss အက်ဖ်အကျိုးကို၏ dopamine ယူဆချက်: အတိတ်နှင့်လက်ရှိအဆင့်အတန်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1999; 22 (11): 521-527 ။ [PubMed]
94 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004;5(6): 483-494 ။ [PubMed]
95. ပညာရှိ RA, Bozarth MA ။ စွဲ၏တစ် ဦး စိတ်ပညာလှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1987; 94 (4): 469-492 ။ [PubMed]
96. ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamic ဆွ accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1988a; 44 (4-5): 599-606 ။ [PubMed]
97. ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်းအစားအစာဆုနှင့်ကိုကင်းသည်နျူကလိယ၌ extracellular dopamine တိုးပွားစေသည်။ ဘဝသိပ္ပံ 1988b; 42 (18): 1705-1712 ။ [PubMed]
et al 98. Hoebel BG ။ ဦး နှောက် Norepinephrine, Serotonin နှင့် Dopamine ထုတ်လွှတ်မှု၏ microrodialysis လေ့လာမှုများ Ingestive အပြုအမူသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ နယူးယောက်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, 1989 575: 171-193 ။ (လူ့အဟာရစိတ်ရောဂါများဆိုင်ရာစိတ်ပညာဆိုင်ရာဗေဒ - အကြိုဆေးကုသမှုနှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့်များ) [PubMed]
99. McCullough LD, Salamone JD ။ နျူကလိယ accumbens သို့ phencyclidine ၏တိုက်ရိုက်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်တိုး။ ဦး နှောက်သုတေသန။ 1992b; 577 (1): 1-9 ။ [PubMed]
100. Radhakishun FS, ဗန်ရိ JM, Westerlink BH ။ On-line ဦး နှောက်ကျောက်ကပ်ဆေးကြောတွက်ချက်မှုအရအစားအစာချို့တဲ့သောကြွက်များ၏နျူကလိယတွင်စားသုံးရန်စီစဉ်ထားသောအစာသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ Neurosci လက်တ 1988; 85 (3): 351-356 ။ [PubMed]
101. Yoshida M က, et al ။ အစာစားခြင်းနှင့်သောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral tegmental inရိယာများတွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးပွားလာခြင်း - in vivo microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံပေးစာ။ 1992; 139 (1): 73-76 ။ [PubMed]
102. Westerlink BH, Teisman A, de Vries JB ။ နို့ရည်ကနေ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာတာဟာနို့တိုက်ကျွေးမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။ Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol ။ 1994; 349 (3): 230-235 ။ [PubMed]
103. Martel P ကို, Fantino အမ်လွှမ်းမိုးမှု mesolimbic dopaminergic စနစ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မျိုချမိသောအစားအစာပမာဏ: တစ် ဦး က microdialysis လေ့လာမှု။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1996a; 55 (2): 297-302 ။ [PubMed]
အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခု function ကိုအဖြစ် 104. Martel P ကို, Fantino အမ် Mesolimbic dopaminergic စနစ်လှုပ်ရှားမှု: တစ် ဦး က microdialysis လေ့လာမှု။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1996b; 53 (1): 221-226 ။ [PubMed]
105. Kringelbach ML ။ Human Orbitofrontal Cortex ကို Liquid Food Stimulus သို့ activation သည်၎င်းသည်ပုဂ္ဂလဓိive္ဌာန်ကျသာမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ Cereb Cortex ။ 2003; 13 (10): 1064-1071 ။ [PubMed]
106. Berridge KC ။ အစားအစာဆု - ဦး နှောက်လိုချင်မှုနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအလွှာများ။ Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ။ 1996; 20 (1): 1-25 ။ [PubMed]
107. Berthoud HR ။ အာရုံကြောစနစ်များသည်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ။ 2002; 26 (4): 393-428 ။ [PubMed]
108. Norgren R, Hajnal A, Mungarndee အက်စ်အက်စ်။ ဆန္ဒအလျောက်ဆုလာဘ်နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2006; 89 (4): 531-535 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
109 ။ Kringelbach ML ။ လူ့ orbitofrontal cortex: hedonic အတွေ့အကြုံဆုလာဘ်ချိတ်ဆက်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2005;6(9): 691-702 ။ [PubMed]
dorsal striatum တွင် DM အသေးစား DM၊ ဂျုံးစ် -Gotman M၊ Dagher A. နို့တိုက်ကျွေးသော - dopamine ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည်ကျန်းမာသောလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများတွင်အစာစားခြင်းသာယာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ NeuroImage ။ 110a; 2003 (19): 4-1709 ။ [PubMed]
et al 111. အသေးစား DM ။ ချောကလက်စားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမှုများ။ ဦး နှောက်။ 2001; 124 (9): 1720-1733 ။ [PubMed]
112. Berridge KC, Kringelbach ML ။ ထိရောက်သောစိတ်ကျေနပ်မှုအာရုံကြောသိပ္ပံ - လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆု။ စိတ်ပညာ။ 2008; 199 (3): 457-480 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
113. Rolls ET ။ ဦး နှောက်တွင်းရှိအာရုံခံလုပ်ဆောင်မှုသည်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ အာဟာရအသင်း၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2007; 66 (01): 96-112 ။ [PubMed]
114. De Vries TJ, Schoffelmeer ANM ။ Cannabinoid CB1 receptors သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2005; 26 (8): 420-426 ။ [PubMed]
relapse ယန္တရား၏ 115. Fattore L ကို, Fadda P ကို, Fratta ဒဗလျူ Endocannabinoid စည်းမျဉ်း။ ဆေးဝါးဗေဒသုတေသန။ 2007; 56 (5): 418-427 ။ [PubMed]
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက် endocannabinoid စနစ်၏ 116. Maldonado R ကို, Valverde အို, Berrendero အက်ဖ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 29 (4): 225-232 ။ [PubMed]
117. Onaivi ES ။ မူးယစ်ဆေးဆုနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတစ်ခု Endocannabinoid အယူအဆ။ နယူးယောက်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏မှတ်တမ်း, 2008 1139: 412-421 ။ (မူးယစ်ဆေးစွဲမှု - သုတေသနနယ်ပယ်များနှင့်ကုသမှုတိုးတက်မှုများ) [PubMed]
118. Parolaro: D, Vigano: D, Rubino T. Endocannabinoids နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုမှု။ Curr မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ် CNS Neurol Disord ။ 2005;4(6): 643-655 ။ [PubMed]
ဦး နှောက်ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 119. Solinas M က, Goldberg SR, Piomelli The အဆိုပါ endocannabinoid စနစ်။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2008; 154 (2): 369-383 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
120. Solinas M, Yasar S, Goldberg SR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Endocannabinoid စနစ်ပါဝင်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒသုတေသန။ 2007; 56 (5): 393-405 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Endocannabinoid နှင့်ဆေးခြောက်နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများတွင် Yamamoto T၊ Anggadiredja K၊ Hiranita T. အသစ်ရှုထောင့် - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် Endocannabinoid-Arachidonic အက်ဆစ်လမ်းကြောင်းအတွက်အခန်းကဏ္။ ။ ဆေးဝါးသိပ္ပံဂျာနယ်။ 121; 2004 (96): 4-382 ။ [PubMed]
122. ဗန်ရိ JM, Gerrits MAFM, Vanderschuren LJMJ ။ Opioids, ဆုနှင့်စွဲ: ဇီဝဗေဒ, စိတ်ပညာနှင့်ဆေးပညာတစ်ခုကြုံတွေ့ရ။ Pharmacol ဗျာ 1999; 51 (2): 341-396 ။ [PubMed]
et al 123. ဗန်ရိ JM ။ endogenous opioids နှင့်ဆုလာဘ်။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2000; 405 (1-3): 89-101 ။ [PubMed]
et al 124. Shinohara Y ကို။ နျူကလိယ accumbens အတွက် Cannabinoid palatable ဖြေရှင်းချက်၏စားသုံးမှုတိုးမြှင့်။ NeuroReport 2009; 20 (15): 1382-138 ။ Doi: 10.1097 / WNR.0b013e3283318010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al 125. Cota: D ။ အစားအစာစားသုံးမှု၏ modulator အဖြစ် endogenous cannabinoid စနစ်။ Int J Obes Relat Metab Disord ။ 2003; 27 (3): 289-301 ။ [PubMed]
126. Tanda, G, Goldberg SR ။ ဆေးခြောက် - အကျိုးခံစားခွင့်၊ မှီခိုမှုနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောဓာတုယန္တရားများ - မကြာသေးမီကကြိုတင်ဆေးပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ စိတ်ပညာ။ 2003; 169 (2): 115-134 ။ [PubMed]
127. Levine AS, Billington CJ ။ ဆုလာဘ် -related နို့တိုက်ကျွေးရေး၏အေးဂျင့်အဖြစ် Opioids: အထောက်အထားတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2004; 82 (1): 57-61 ။ [PubMed]
et al 128. Cota: D ။ Cannabinoids, opioids နှင့်အစာစားခြင်းအပြုအမူ: hedonism ၏မော်လီကျူးမျက်နှာ? ဦး နှောက်သုတေသနသုံးသပ်ချက်များ။ 2006; 51 (1): 85-107 ။ [PubMed]
အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်စည်းမျဉ်းများတွင် 129. Jesudason: D, Wittert G. အ Endocannabinoid စနစ်။ Curr ထင်မြင်ချက် Lipidol ။ 2008; 19 (4): 344-348 ။ [PubMed]
130. Wassum KM ။ ကွဲပြားသော opioid ဆားကစ်များသည်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ရပ်များနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်ရပ်များ၏ဆန္ဒရှိမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106 (30): 12512-12517 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
131. Volkow Nd, et al ။ လူသားများတွင်စိတ်စူးစိုက်မှု၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ဦး နှောက် Dopamine တိုးပွားလာခြင်းနှင့် D2 Receptors များ၏ထွင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999a; 291 (1): 409-415 ။ [PubMed]
et al 132. Volkow nd ။ Brain Dopamine D2 Receptor Levels ဖြင့်လူသားများအတွင်းရှိစိတ်ဓာတ်စိတ်ကြွဆေးများအားတုန့်ပြန်မှုများကိုအားဖြည့်ခြင်း၏ခန့်မှန်းချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999b; 156 (9): 1440-1443 ။ [PubMed]
et al 133. Volkow nd ။ လူသားများတွင် "Nonhedonic" အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုသည် dorsal striatum တွင် dopamine ပါ ၀ င်ပြီး methylphenidate မှဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးစေသည်။ Synapse ။ 2002a; 44 (3): 175-180 ။ [PubMed]
134. Salamone JD၊ Mahan K၊ Rogers S. Ventrolateral striatal dopamine လျော့နည်းမှုသည်ကြွက်များတွင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစားအစာကိုင်တွယ်ခြင်းကိုအားနည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1993; 44 (3): 605-610 ။ [PubMed]
135. O'Doherty J ကို။ လူ့ orbitofrontal cortex ၏အာရုံခံ - တိကျတဲ့ကျဲကျ -related olfactory activation ။ NeuroReport 2000; 11 (4): 893-897 ။ [PubMed]
136. Rolls ET ။ အရသာနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုအခြေခံသည့် ဦး နှောက်ယန္တရားများ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2006; 361 (1471): 1123-1136 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
137. Pelchat ML, et al ။ အလိုဆန္ဒ၏ပုံများ: fMRI အတွင်းစားနပ်ရိက္ခာတပ်မက်ခြင်း။ NeuroImage ။ 2004; 23 (4): 1486-1493 ။ [PubMed]
138. Rolls ET, McCabe C. သည် cravers ရှိ non-cravers vs. ချောကလက်၏အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သော ဦး နှောက်ကိုယ်စားပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2007; 26 (4): 1067-1076 ။ [PubMed]
et al 139. McClernon FJ ။ ၂၄ နာရီဆေးလိပ်မဖြတ်ခြင်းသည် fMRI-BOLD ကို ဦး နှောက် cortex နှင့် dorsal striatum ရှိဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ Psychopharmacology, 24 2009: 204-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 140. Childress AR ။ Cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအားစဉ်အတွင်း Limbic Activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156 (1): 11-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
141. Kilts CD ကို, et al ။ ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးစွဲလိုသည့်စိတ်ကြွလှုပ်ရှားမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 58 (4): 334-341 ။ [PubMed]
142. Franklin TR ။ နီကိုတင်းထုတ်ယူမှု မှလွဲ၍ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှ Limbic Activation: Perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (11): 2301-2309 ။ [PubMed]
et al 143. Filbey FM ရေ။ ဦး နှောက်ထဲမှာဆေးခြောက်တပ်မက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ 2009; 106 (31): 13016-12021 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 144. Garavan H ကို။ cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်မက်: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Stimuli များအတွက် Neuroanatomical အထူးသ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 157 (11): 1789-1798 ။ [PubMed]
145. Maas LC, et al ။ Cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်မက်စဉ်အတွင်းလူ့ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း၏သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 155 (1): 124-126 ။ [PubMed]
et al 146. McBride: D ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအခြေအနေသို့အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအပေါ်မျှော်လင့်ထားခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31 (12): 2728-2738 ။ [PubMed]
147. ဝမ် ZFM ။ နာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ရှောင်ကြဉ် - သွေးဆောင်စီးကရက်တပ်မက်၏အာရုံကြောအလွှာ။ J ကို Neurosci ။ 2007; 27 (51): 14035-14040 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
148. Bonson KR ။ အာရုံကြောစနစ်များနှင့် cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတဏှာ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 376-386 ။ [PubMed]
et al 149. Grant က S ။ cue- နှိုးဆွသောကင်းတိမ်မြုပ်နေစဉ်မှတ်ဉာဏ်ပတ်လမ်းများကိုဖွင့်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ 1996; 93 (21): 12040-12045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
150. Stice အီး, et al ။ အစားအစာစားသုံးမှုမှမျှော်လင့်ထားသည့်အစားအစာစားသုံးမှုမှအဝလွန်ခြင်းမှဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်မှု - အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2008a; 117 (4): 924-935 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 151. Stice အီး။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားအစာအားအလွန့်အလွန်နည်းပါးစွာတုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကို TaqIA A1 Allele မှသုံးသပ်သည်။ သိပ္ပံ 2008b; 322 (5900): 449-452 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 152. Epstein LH ။ အစားအစာအားဖြည့်ခြင်း၊ dopamine D2 receptor genotype နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့် nonobese လူသားများတွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲခြင်း။ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007; 121 (5): 877-886 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 153. Klein TA ။ အမှားမှသင်ယူခြင်းအတွက်မျိုးရိုးဗီဇစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ 2007; 318 (5856): 1642-1645 ။ [PubMed]
et al 154. Blum K သည်။ Reward deficiency syndrome - ထကြွလွယ်သော၊ စွဲလမ်းစေတတ်သော၊ J ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ 2000; 32 (ပေးသွင်း: i-iv): 1-112 ။ [PubMed]
et al 155. လူငယ် RM ။ မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇတိုးတက်မှုနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတိုးတက်မှု - D1 dopamine receptor gene ၏ A2 allele ၏အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2004; 29 (7): 1275-1294 ။ [PubMed]
et al 156. Najafabadi က MS ။ အီရန်လူ ဦး ရေတွင် DRD2 A1 allele နှင့်ဘိန်းစွဲမှုအကြားဆက်စပ်မှု။ Am J Med Genet B: Neuropsychiatr မျိုးရိုးဗီဇ။ 2005; 134B (1): 39-41 ။ [PubMed]
et al 157. ဟန် DH ။ တစ် ဦး ကပဏာမလေ့လာမှု: အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း, တိုကျရိုကျအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် dopamine အဲဒီ receptor (D2) TaqI တစ် ဦး ကဗီဇ polymorphic methamphetamine မှီခိုနှင့်အတူလူနာ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 49 (4): 387-392 ။ [PubMed]
et al 158. Ito R ကို။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့် Cue ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူစဉ်အတွင်း Dorsal Striatum တွင် Dopamine ထုတ်လွှတ်မှု။ J ကို Neurosci ။ 2002; 22 (14): 6247-6253 ။ [PubMed]
159. Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အားဖြည့်ပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များ - လုပ်ရပ်များမှအလေ့အထများ၊ နတ်နေရာသစ်။ 2005; 8 (11): 1481-1489 ။ [PubMed]
160. Koob GF, Volkow ND ။ စွဲ၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009
161. Rothemund Y ကို, et al ။ အဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် High- ကယ်လိုရီအမြင်အာရုံအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် dorsal striatum ၏ differential ကို activation ။ NeuroImage ။ 2007; 37 (2): 410-421 ။ [PubMed]
162. Stoeckel LE ။ အ ၀ လွန်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ကယ်လိုရီမြင့်မားသောအစားအစာများ၏ဓါတ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဆုလာဘ်စနစ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ NeuroImage ။ 2008; 41 (2): 636-647 ။ [PubMed]
163. Stice အီး, et al ။ အဝလွန်ခြင်း၏ဆက်စပ်မှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းအစားအစာဆုလာဘ်ဆက်စပ် ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2009; 97 (5): 551-560 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
164. ဝမ် GJ, et al ။ အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်ပါးစပ် somatosensory cortex ၏အနားယူလှုပ်ရှားမှုတိုး။ နေပြည်တော်။ 2002; 13 (9): 1151-1155 ။ [PubMed]
165. Stoeckel LE ။ အဝလွန်အမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးရှိသည့်ကွန်ယက်၏ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှု။ ဦး နှောက်သုတေသနစာစောင်။ 2009; 79 (6): 388-395 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
166. Ma N ကို, et al ။ ကျိန်းဝပ် - ပြည်နယ် ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲ။ NeuroImage ။ 2010; 49 (1): 738-744 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 167. Del Parigi တစ် ဦး ။ Neuroimaging နှင့်အဝလွန်ခြင်း - Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography ကို အသုံးပြု၍ လူသားများအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့်အဟာရကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုများကိုပုံဖော်ခြင်း။ နယူးယောက်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, 2002 967: 389-397 ။ (Lipids နှင့်အင်ဆူလင်ဓာတ်ခံနိုင်ရည်: အဆီအက်ဆစ်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်လောင်စာကိုပိုင်းခြားခြင်း၏အခန်းကဏ္)) [PubMed]
168. Gautier JF, et al ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပိန်ပိန်သောအမျိုးသားများတွင်စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုများ။ ဆီးချိုရောဂါ။ 2000; 49 (5): 838-846 ။ [PubMed]
169. Gautier JF ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပိန်ကြုံသောအမျိုးသမီးများတွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် Satiation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အဝလွန်ခြင်း။ 2001;9(11): 676-684 ။ [PubMed]
170. Volkow Nd, et al ။ dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုလျော့ကျခြင်းသည်ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Synapse ။ 1993; 14 (2): 169-177 ။ [PubMed]
171. Volkow Nd, et al ။ Postynaptic dopamine receptors များအပေါ်နာတာရှည်ကိုကင်းအလွဲသုံးမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990; 147 (6): 719-724 ။ [PubMed]
172. Volkow Nd, et al ။ detoxified ကိုကင်း - မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ သဘာဝ။ 1997; 386 (6627): 830-836 ။ [PubMed]
et al 173. Chang L ကို။ methamphetamine အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် striatum တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများ။ စွဲ။ 2007; 102 (ပျော့ပျောင်း 1): 16-32 ။ [PubMed]
174. Volkow Nd, et al ။ Methamphetamine အလွဲသုံးစားလုပ်သူများအတွက် ဦး နှောက် Dopamine D2 လက်ခံသောအနိမ့်အဆင့် - Orbitofrontal Cortex ရှိဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158 (12): 2015-2021 ။ [PubMed]
175. Hietala J ကို, et al ။ အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် Vivo အတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများ binding Striatal D2 dopamine အဲဒီ receptor ။ စိတ်ပညာ။ 1994; 116 (3): 285-290 ။ [PubMed]
et al 176. Volkow nd ။ dopamine receptor များလျော့နည်းသော်လည်းအရက်သမားများတွင် dopamine transporters များမဟုတ်ပါ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996; 20 (9): 1594-1598 ။ [PubMed]
177. Volkow Nd, et al ။ အရက်သေစာအတွက် dopamine D2 receptors အပေါ်အရက် detoxification ၏ဆိုးကျိုးများ: ပဏာမလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု: Neuroimaging ။ 2002b; 116 (3): 163-172 ။ [PubMed]
178. Fehr ကို C, et al ။ အခြားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမြင်ရတူနီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူအနိမ့် Striatal Dopamine D2 Receptor ရရှိနိုင်၏အသင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 165 (4): 507-514 ။ [PubMed]
et al 179. ဝမ် GJ ။ naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာမီနှင့်အပြီး opiate- မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1997; 16 (2): 174-182 ။ [PubMed]
et al 180. Malison RT ကို။ [123I] β-CIT SPECT မှတိုင်းတာသည့်အတိုင်းအတာကိုကင်းကင်းတားနေစဉ်မြင့်မားသော Striatal Dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 155 (6): 832-834 ။ [PubMed]
et al 181. McCann ud ။ Abstinent Methamphetamine နှင့် Methcathinone အသုံးပြုသူများအတွက် Striatal Dopamine Transporter သိပ်သည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်း [11C] WIN-35,428 နှင့်အတူ Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography လေ့လာမှုများမှအထောက်အထား။ J ကို Neurosci ။ 1998; 18 (20): 8417-8422 ။ [PubMed]
et al 182. Sekine Y ကို။ ပေနှင့်အတူလေ့လာခဲ့သောမက်သာဖီတမင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်မှလျှော့ချထားသော ဦး နှောက် Dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158 (8): 1206-1214 ။ [PubMed]
et al 183. Laine TP ။ Dopamine သယ်ဆောင်သူများသည်အရက်ကိုသောက်ပြီးနောက်လူ့ ဦး နှောက်တွင်တိုးများလာသည်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;4(2): 189-191 ။ [PubMed]
et al 184. ယန် YK ။ ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင် dopamine Transporter ရရှိမှုလျော့နည်းလာခြင်း - DD isotope SPECT လေ့လာမှု။ Neuro-Psychopharmacology နှင့်ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုတိုးတက်မှု။ 2008; 32 (1): 274-279 ။ [PubMed]
et al 185. Volkow Nd ။ အနိမ့် dopamine striatal D2 receptors အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်: ဖြစ်နိုင်သောပံ့ပိုးအချက်များ။ NeuroImage ။ 2008a; 42 (4): 1537-1543 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 186. Volkow Nd ။ Detoxified အရက်သမားများတွင် Striatum တွင် Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်း - ဖြစ်နိုင်သော Orbitofrontal ပါ ၀ င်မှု။ J ကို Neurosci ။ 2007; 27 (46): 12700-12706 ။ [PubMed]
et al 187. Volkow Nd ။ BMI နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအကြားတွင်ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှု။ အဝလွန်ခြင်း။ 2008b; 17 (1): 60-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 188. as လိယ MF ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်သွေးတိုးရောဂါ၏ရှေ့မှောက်၌အောက်ပိုင်းသိမြင်မှု function ကို: အ Framingham နှလုံးလေ့လာမှု။ Int J Obes Relat Metab Disord ။ 2003; 27 (2): 260-268 ။ [PubMed]
et al 189. Elias MF ။ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် - Framingham Heart Study ။ အိုမင်းခြင်း၏ Neurobiology ။ 2005; 26 (1, ဖြည့်စွက် 1): 11-16 ။ [PubMed]
et al 190. Gunstad J ကို။ အဝလွန်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်လူကြီးများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အလေးချိန် Disord စားပါ။ 2006; 11 (1): e15-19 ။ [PubMed]
191. Gunstad J ကို, et al ။ မြင့်မားသောခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းသည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သောလူကြီးများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 48 (1): 57-61 ။ [PubMed]
192. Cserjési R ကို, et al ။ အဝလွန်ခြင်းအတွက်ပြောင်းလဲအလုပ်အမှုဆောင် function ကို။ သိမြင်မှုစွမ်းရည်အပေါ်ထိခိုက်ပြည်နယ်များ၏အခန်းကဏ္ofကို၏စူးစမ်း။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 52 (2): 535-539 ။ [PubMed]
et al 193. Gunstad J ကို။ ကျန်းမာသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2008; 50 (2-3): 246-251 ။ [PubMed]
et al 194. Pannacciulli ။ လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်မူမမှန်: တစ် ဦး က voxel-based morphometric လေ့လာမှု။ NeuroImage ။ 2006; 31 (4): 1419-1425 ။ [PubMed]
et al 195. Taki Y ကို။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်းနှင့် Grey Matter Volume အကြားဆက်ဆံရေး ၁,၂၂၈ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်။ အဝလွန်ခြင်း။ 1,428; 2008 (16): 1-119 ။ [PubMed]
et al 196. Gunstad J ကို။ ကျန်းမာသောအရွယ်ရောက်သူများတွင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်းနှင့် ဦး နှောက်ပမာဏအကြားဆက်ဆံရေး။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2008; 118 (11): 1582-1593 ။ [PubMed]
et al 197. Liu X ကို။ polysubstance ချိုးဖောက်မှုများအတွက် prefrontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏သေးငယ်အသံအတိုးအကျယ်: တစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1998; 18 (4): 243-252 ။ [PubMed]
et al 198. Franklin TR ။ ကိုကင်းလူနာများ၏ insular, orbitofrontal, cingulate နှင့်ယာယီ cortices အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 51 (2): 134-42 ။ [PubMed]
199 Fein G, Di Sclafani V, Meyerhoff DJ သမား။ ၆ ပတ်ကြာ abstinent crack-cocine မှီခိုသောအမျိုးသားများတွင်တိုကျရိုကျ cortex function ကိုလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် prefrontal cortical volume လျှော့ချမှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 6; 2002 (68): 1-87 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 200 Matochik ဂျာ။ abstinent ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက် front-cortical တစ်ရှူးဖွဲ့စည်းမှု: တစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ NeuroImage ။ 2003; 19 (3): 1095-1102 ။ [PubMed]
et al 201. Tanabe J ကို။ Medial Orbitofrontal Cortex Grey Matter Abstinent Substance- မှီခိုသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်လျှော့ချသည်။ ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65 (2): 160-164 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
202. Sim ME, et al ။ Cerebellar Grey Matter Volume သည်ကိုကိုးအားကိုးနေသည့်ဘာသာရပ်များတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (10): 2229-2237 ။ [PubMed]
203. Lyoo ငါ, et al ။ prefrontal နှင့်ယာယီမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆ opiate မှီခိုအတွက်လျော့နည်းစေသည်။ စိတ်ပညာ။ 2006; 184 (2): 139-144 ။ [PubMed]
et al 204. Childress AR ။ cue- သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156 (1): 11-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
205. ကယ်လီ AE ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: မျှဝေအာရုံကြော circuit ကိုနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuron ။ 2004; 44 (1): 161-79 ။ [PubMed]
et al 206. Argilli အီး။ အဆိုပါ ventral tegmental inရိယာ၌ကိုကင်း - သွေးဆောင်ရေရှည်အလားအလာ၏ယန္တရားနှင့်အချိန်သင်တန်း။ J ကို Neurosci ။ 2008; 28 (37): 9092-100 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
207. Wanat MJ, et al ။ အီသနောထိတွေ့ပြီးနောက် Ventral Tegmental Dရိယာ Dopamine အာရုံခံအပေါ် Strain တိကျတဲ့ Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
208. Mayfield RD, Harris က RA, Schuckit MA ။ အရက်မှီခိုမှုကိုလွှမ်းမိုးသောမျိုးရိုးဗီဇအချက်များ။ Br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154 (2): 275-87 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
209. Schuckit MA ။ အရက်၏မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ J အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံမှု။ 2009; 36 (1): S5-14 ။ [PubMed]
210 ။ Sinha R. နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲမှအားနည်းချက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008; 1141: 105-30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
211. Archer JS, et al ။ မီးယပ်သွေးဆုံးအမျိုးသမီးများတွင် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေသည့်ပုံစံများအပေါ်အက်ဒီဒီယေးလ်နှင့်အက်စရာဒီယိုနှင့်အက်တီဒီယမ်ဟော်မုန်းတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ သွေးဆုံး။ 2006; 13 (3): 528-37 ။ [PubMed]
212. Carnes PJ ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်: အသိအမှတ်ပြုမှု, ကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ CNS Spectr ။ 2000;5(10): 63-72 ။ [PubMed]
213. Delmonico DL, Carnes PJ ။ Virtual Sex စွဲလမ်းမှု - Cybersex သည်ရွေးချယ်ရမည့်ဆေးဖြစ်လာသည်။ Cyberpsychol Behav ။ 1999;2(5): 457-63 ။ [PubMed]
214. Arnow BA, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲလိင်ယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက်။ 2002; 125 (Pt 5): 1014-23 ။ [PubMed]
215. Georgiadis JR ။ ကျန်းမာသောအမျိုးသမီးများအတွက်လတ်တလောသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒေသတွင်းသွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်း။ Eur J ကို Neurosci ။ 2006; 24 (11): 3305-16 ။ [PubMed]
216. Hamann S က, et al ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်မှုအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားသည်။ နတ်နေရော့စီ။ 2004;7(4): 411-6 ။ [PubMed]
217. Volkow Nd, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ကိုပုံဖော်ပေးခြင်း။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 3-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
218. Volkow Nd, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲတွင် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကုသမှု၏ရလဒ်များ။ Arch Neurol ။ 2007; 64 (11): 1575-9 ။ [PubMed]
219. Knutson B က။ မျှော်မှန်းတန်ဖိုး၏ဖြန့်ဝေအာရုံကြောကိုယ်စားပြုမှု။ J ကို Neurosci ။ 2005; 25 (19): 4806-12 ။ [PubMed]
220. Kufahl PR စနစ်, et al ။ fMRI မှတွေ့ရှိသောလူ့ ဦး နှောက်တွင်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပေါ်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ။ Neuroimage ။ 2005; 28 (4): 904-14 ။ [PubMed]
221. Breiter HC ။ လူ့ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများ။ Neuron ။ 1997; 19 (3): 591-611 ။ [PubMed]
222. Ortigue S က။ အဖြစ်အပျက် -related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: တစ် subliminal ချုပ်အဖြစ်မတ်ေတာ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ J ကို Cogn Neurosci ။ 2007; 19 (7): 1218-30 ။ [PubMed]
223. Agmo A, Gomez M. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်အား naloxone ကို medial preoptic areaရိယာသို့ပြန့်နှံ့စေခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ Behav Neurosci ။ 1993; 107 (5): 812-8 ။ [PubMed]
224. Paredes RG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ neurobiology အကဲဖြတ်။ Ilar ဂျေ 2008; 50 (1): 15-27 ။ [PubMed]
225. Etgen AM, Ansonoff MA, hypothalamus အတွက် norepinephrine အဲဒီ receptor-mediated signal ကို transduction ၏သားအိမ် steroid စည်းမျဉ်း၏ Quesada အေယန္တရားများ: အမျိုးသမီးမျိုးပွားဇီဝကမ္မဗေဒများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Horm Behav ။ 2001; 40 (2): 169-77 ။ [PubMed]
226. Gonzalez-Flores အို။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အင်္ဂါဇာတ်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှိုးဆွခြင်းဖြင့် estrous အပြုအမူကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လမ်းကြောင်း၏ alpha1-adrenergic receptor activation ပါ ၀ င်သည်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2007; 176 (2): 237-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
227. Wood က RI က။ အန်ဒရိုဂျင်၏ရှုထောင့်အားဖြည့်ခြင်း Physiol Behav ။ 2004; 83 (2): 279-89 ။ [PubMed]
နို့တိုက်သတ္တဝါများမျိုးပွားမှုတွင် Fisher H. Lust၊ ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်တွယ်ကပ်ခြင်း။ ဟမ်းနတ် 228; 1998: 9-23 ။
229. Fisher က, Aron တစ် ဦး က, ဘရောင်း LL ။ Romantic love - အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုအတွက်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါတစ် ဦး ဦး စနစ်။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2006; 361 (1476): 2173-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
230. Aron A, et al ။ အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆုလာဘ်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ။ J ကို Neurophysiol ။ 2005; 94 (1): 327-37 ။ [PubMed]
231. Fisher သည် H ကို, Aron တစ် ဦး က, ဘရောင်း LL ။ Romantic love - အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုအတွက်အာရုံကြောယန္တရားကို fMRI လေ့လာခြင်း။ J ကို Comp Neurol ။ 2005; 493 (1): 58-62 ။ [PubMed]
232. Fisher သည် H ကို, et al ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ Society က။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း; San Diego: ၂၀၀၅ ။ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပြီးနောက်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်။ FMRI လေ့လာမှု။
233. Acevedo B, et al ။ အပြင်းအထန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလူသားများနမူနာတွင်ရေရှည်စုံတွဲတွဲခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးစီမံ; ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အွန်လိုင်း 2008 ။
234. Lim MM, Murphy က AZ, လူငယ် LJ ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) J Comp Neurol အတွက် Ventral striatopallidal oxytocin နှင့် vasopressin V1a receptors ။ 2004; 468 (4): 555-70 ။ [PubMed]
235. လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ Nucleus သည် oxytocin နှင့် dopamine တို့ကို accumbens သည်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသတွင်အနှောင်အဖွဲ့နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003; 121 (3): 537-44 ။ [PubMed]
၂၃၆။ Bowlby J. Attachment and Loss: ခွဲခြင်း - စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ဒေါသ။ Vol ။ 236. နယူးယောက်: အခြေခံစာအုပ်များ;2။
237. Harlow HF, Zimmermann RR ။ မွေးကင်းစကမျောက်ထဲမှာချစ်ခင်စုံမက်တုံ့ပြန်မှု; မိဘမဲ့ကလေးမျောက်များသည်သက်မဲ့အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်ခိုင်မာသောစွဲမြဲခိုင်မြဲမှုရှိသည်။ သိပ္ပံ 1959; 130 (3373): 421-32 ။ [PubMed]
238. Strathearn L ကို, et al ။ အပြုံးထဲမှာဘာလဲ မွေးကင်းစကလေးမျက်နှာများမှမိခင် ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှု။ ကလေးအထူးကု။ 2008; 122 (1): 40-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
239. Flores PJ ။ ပူးတွဲမှုရောဂါအဖြစ်စွဲ: အုပ်စုတစ်စုကုထုံးများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Int J ကို Group မှ Psychother ။ 2001; 51 (1): 63-81 ။ [PubMed]
240. Flores PJ ။ တစ် ဦး ပူးတွဲပါရောဂါအဖြစ်စွဲ။ နယူးယောက်: Jason Aronson; 2004 p ။ 345 ။
241. Kraemer GW ။ အစောပိုင်း neurobiological- အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အစောပိုင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ In: Reite M၊ Field T၊ အယ်ဒီတာများ။ ပူးတွဲမှုနှင့်ခွဲခြာ၏ pschobiology ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ နယူးယောက်: 1985 ။
၂၄၂ ။ Martikainen P, Valkonen T. အိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးပြီးနောက်သေဆုံးမှု - ဖင်လန်အလွှာကြီးတစ်ခုတွင်သေဆုံးမှုနှုန်းနှင့်အကြောင်းရင်းများ။ Am J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 242; 1996 (86): 8-1087 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
243. Risinger RC, et al ။ BOLD fMRI ကို အသုံးပြု၍ ကိုကာကိုလာကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်းမြင့်မားသောနှင့်တဏှာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ Neuroimage ။ 2005; 26 (4): 1097-108 ။ [PubMed]
et al 244. Childress AR ။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှု၏နိဂုံး -“ မမြင်ရသော” မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအရ Limbic Activation ။ PLOS ONE ။ 2008;3(1): e1506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
245. O'Brien ကို C, Cornish က JW ။ စမ်းနှင့် parolees များအတွက် Naltrexone ။ J Subst အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံမှု။ 2006; 31 (2): 107-11 ။ [PubMed]
246. Oslin DW, Berrettini WH၊ O'Brien CP ။ naltrexone ၏ pharmacogenetics: အရက်မှီခိုမှုအတွက်ကုသမှုရည်မှန်းချက်။ စွဲ Biol ။ 2006; 11 (3-4): 397-403 ။ [PubMed]
247. Greenway FL, et al ။ အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်ပေါင်းစပ်ဆေး၏ဆင်ခြင်တုံတရားဒီဇိုင်း။ အဝလွန်ခြင်း (Silver Spring) 2009; ၁၇ (၁)၊ ၃၀-၉ ။ [PubMed]
248. Roberts သည် DC က။ ကိုကာကိုလာစွဲများအတွက်ဆေးဝါးကုထုံးအဖြစ် GABAB agonists များအတွက် preclinical သက်သေအထောက်အထား။ Physiol Behav ။ 2005; 86 (1-2): 18-20 ။ [PubMed]
249. Di Ciano P ကို, Everitt BJ ။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကထိန်းသိမ်းထားသောကင်းကိုရှာဖွေခြင်းအတွက် ventral tegmental areaရိယာ၏အလှူငွေ။ Eur J ကို Neurosci ။ 2004; 19 (6): 1661-7 ။ [PubMed]
250. Paterson NE, Froestl W, Markou အေ။ GABAB receptor agonists baclofen နှင့် CGP44532 တို့သည်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172 (2): 179-86 ။ [PubMed]
et al 251. Colombo, G ။ Baclofen သည်အရက်ကိုကြွက်များစားသုံးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 167 (3): 221-4 ။ [PubMed]
252. Brebner K သည်, Childress AR, Roberts သည် DC ။ psychostimulant စွဲ၏ကုသမှုအတွက် GABA (ခ) agonists များအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္။ ။ အရက်။ 2002; 37 (5): 478-84 ။ [PubMed]
253. Ameisen O. မြင့်မားသောထိုး baclofen ကိုအသုံးပြု။ အရက် - မှီခို၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးဆက်များ၏ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်ကြာရှည်ဖိနှိပ်မှု: ဆရာဝန်တစ် ဦး ၏ Self- ကိစ္စတွင်။ အရက်။ 2005; 40 (2): 147-50 ။ [PubMed]
254. Ameisen O. အကြှနျုပျ၏စွဲ၏အဆုံး။ နယူးယောက်: Farrar, Straus နှင့် Giroux; ၂၀၀၈
et al 255. Addolorato, G ။ Baclofen - အရက်သေစာမှီခိုခြင်းကိုကုသရန်အတွက်ဆေးအသစ်တစ်ခု။ Int J Clin Clin ။ 2006; 60 (8): 1003-8 ။ [PubMed]
256. Corwin RL, Wojnicki FH ။ Baclofen, raclopride နှင့် naltrexone တို့သည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်အဆီနှင့်သcroseစားသုံးမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Behav Pharmacol ။ 2009; 20 (5-6): 537-48 ။ [PubMed]
257 ။ Wojnicki FH, ရောဘတ်, DC, Corwin RL ။ Non-အစားအစာဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်မူးရူး-type အမျိုးအစားအပြုအမူတစ်ခုသမိုင်းပြီးနောက်အစားအစာလုံးလေးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်အဘို့အော်ပရေတာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် baclofen ၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006; 84 (2): 197-206 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 258. Aston-Jones က, G ။ ဘေးထွက် hypothalamic orexin / hypocretin အာရုံခံ: ဆုလာဘ် - ရှာဖွေခြင်းနှင့်စွဲအတွက်အခန်းကဏ္။ ။ Brain Res ။ 2009 Doi: 10.1016 / j.brainres.2009.09.106 ။ S0006-8993 (09) 02096-4 [pii] [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
259 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437 (7058): 556-9 ။ [PubMed]
260 ။ et al Borgland SL ။ Orexin A / hypocretin-1 ရွေးချယ်အပြုသဘောစစ်ကူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29 (36): 11215-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]